စိတ်နှင့်နှလုံးသား - လေ့လာမှုနှင့်တရားစီရင်ခြင်းဆိုင်ရာ စိတ်ခံစားချက်များ (ကော်လံ 467) - အရှင်ဘုရား Michael Avraham
ဦးနှောက်နှင့် နှလုံးသား - လေ့လာမှုနှင့် တရားစီရင်ခြင်းဆိုင်ရာ စိတ်ခံစားမှုများ (ကော်လံ 467)
45 မှတ်ချက်များ	/ T. Benisan 10 - 04/2022/XNUMX 10 / 04 / 2022
လွန်ခဲ့သည့် ရက်အနည်းငယ်က ၎င်းတို့သည် Daf La Bibamot စာမျက်နှာသို့ရောက်ရှိလာပြီး "အိမ်ပြိုကျပြီး သူ့တူလေး ပေါ်လာပြီး ဘယ်သူက အရင်သေသွားမှန်း မသိ၊ အင်္ကျီကို ကျဉ်းပြီး မချွတ်ဘူး။ “
Hayuta Deutsch သည် အောက်ပါမှတ်ချက်ဖြင့် ဤကောက်နုတ်ချက်ကို ကျွန်ုပ်ထံ ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
ကြီးမားသည်။ 'ဓာတ်ခွဲခန်း' တရားဝင် halakhic ကမ္ဘာနှင့် အံ့သြဖွယ်အဖြစ်မှန် (လှပပြီး မျက်ရည်ကျရသော တယ်လီနိုဗီလာ) အကြား တွေ့ဆုံခြင်း၏ အဓိက ဥပမာတစ်ခု (များစွာသော အထူးသဖြင့် လှပသော)။
အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ကြားက ဆွေးနွေးမှုအတွင်း၊ ဒီအရာတွေအတွက် ကော်လံတစ်ခုကို မြှုပ်နှံထားဖို့ သင့်လျော်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
halakhic ပြဿနာများတွင် စိတ်ခံစားမှုနှင့် လူ့အတိုင်းအတာ
ဒီအခြေအနေကို တွေးပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်ကို နည်းနည်းထပ်ဝင်ကြည့်တဲ့အခါ၊ ဒီကံဆိုးတဲ့မိသားစုကို ကြုံခဲ့ရတဲ့ ရိုးစင်းတဲ့ ကြေကွဲမှုတစ်ခု (တစ်ခုစီတိုင်းကို သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ သတိရပါ)။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ဟာ သာမန်ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ အဲဒါကို လုံးဝသတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး ရှုပ်ထွေးတဲ့ halakhic ဆွေးနွေးမှုဖြစ်ပြီး ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ ဒီနေရာမှာ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေ၊ ဆိုလိုတာက လူသားတွေ မရှိပါဘူး။ ၎င်းတို့အားလုံးသည် halakhic-ဉာဏအဆင့်ရှိ ရုပ်ပုံများ သို့မဟုတ် အရိပ်များဖြစ်သည်။ အများစုမှာ halakhic အတွေးအခေါ်များကို ထင်ဟပ်စေရန် ရည်ရွယ်သည့် စိတ်ဓာတ်ကို လေ့ကျင့်ရန်အတွက် ဇာတ်ကောင်ပန်းတိုင်များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် လူသတ်သမားများ၊ သူခိုး၊ သားသတ်သမားများ၊ လူလိမ်များ၊ ဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ကံဆိုးခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပြီး ဤအရာအားလုံးကို အံ့သြဖွယ်ယောနိသောမနသိကာရဖြင့် ဆွေးနွေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဟိုက်ဒရာဘတ်ရှိ ကလေးငယ်များသည် အခြေအနေအရပ်ရပ်တွင် ထိုသို့သောကြုံတွေ့ရပြီးနောက်တွင် ၎င်းတို့၏မိဘများသည် သုခချမ်းသာကို ရိုသေလေးစားပြီး ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစွာ ဘာသာစကားဖြင့် ကျန်ရစ်ခဲ့ကြသော်လည်း စွဲချက်တင်သည့်ပြဿနာများကို သင်ယူနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် ဒီချီတက်ပွဲကြီးတစ်ခုလုံး ငြိမ်းချမ်းစွာဖြတ်သန်းပြီး မျက်တောင်မခတ်ပါဘူး။
ဒီစကားက သူ့တိရစ္ဆာန်ကို အံတုတာ မတွေ့ဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ ဆွေးနွေးမှုလေယာဉ်များ (လူသားနှင့် halakhic) အကြား ထပ်နေခြင်းကို သဘောကျကြသော်လည်း ဆွေးနွေးမှု၏ အေးခဲမှုအပေါ် ဝေဖန်သံများစွာကို နောက်ခံတွင် ကြားခဲ့ရသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဤကိစ္စ၏ ခက်ခဲသော လူ့အတိုင်းအတာကို လျစ်လျူမရှုခြင်း ဖြစ်သည်။ Gemara သည် ဤအမှုကို နို့ချဉ်ရည်ထဲသို့ ကျသွားသည့် အသားတစ်ပိုင်းအဖြစ် ဖော်ပြပြီး ယင်းကိစ္စတွင် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေများကို ဆက်လက် ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ သူမသည် ဤနေရာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော လူသားအဖြစ်ဆိုးများကို လုံးဝ လျစ်လျူရှုထားသည်။ ဤကျန်ရစ်သူမိသားစုသည် ဇနီး (တကယ်တော့ ဒုက္ခများထဲမှ) နှင့် တူညီသော မိသားစုမှ ညီအစ်ကို နှစ်ဦး မရှိဘဲ ကျန်ခဲ့သည်။ မိဘမဲ့ကလေးငယ်တွေကို ထောက်ပံ့ဖို့ ဘယ်သူတွေရှိနေတာလဲ။ (အိုး..တကယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ မဟုတ်ရင် ဒီမှာ အယ်လ်ဘမ်ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။) နှလုံးသားက ဘယ်သူနဲ့မှ မငိုနဲ့၊ ပြီးနောက်၊ ငါတို့ဝိညာဉ်၏နားကိုကြားသောအခါ၊
သူ့တိရိစ္ဆာန်စကားမှာ ကြားလိုက်ရတဲ့ တေးသွားဟာ Bar Ilan (နဲ့ အခြားသော အမျိုးသမီး ကဏ္ဍတွေမှာ) ပါရဂူကျောင်းသားတွေအတွက် beit midrash မှာ ကျွန်မရဲ့နေ့စဉ် တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို နည်းနည်းလေးမှ အခြေခံထားတာလို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်။ ဒီလိုပြဿနာမျိုးကြုံလာတိုင်းလိုလို၊ ဒီလိုအခြေအနေတွေရဲ့ လူ့တန်ဖိုးနဲ့ အထူးသဖြင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရှုထောင့်တွေကနေ တုန်လှုပ်ချောက်ချားတဲ့ ကိုးကားချက်တွေ ရှိတယ်၊ Gemara ကို ဝေဖန်တာနဲ့ အဲဒီရှုထောင့်တွေကို သင်ယူသူတွေရဲ့ လျစ်လျူရှုမှုလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူထင်ဟပ်နေသော အေးစက်မှုနှင့် လျစ်လျူရှုမှုသည် နားမလည်နိုင်သလို စိတ်ကူးမယဉ်နိုင်ပေ။ ဖခင်ဖြစ်သူက သူ့သမီးငယ်ကို ပြုတ်ကျတဲ့ အမျိုးသားဆီ လွှဲပြောင်းပေးအပ်တဲ့ ကိစ္စရပ်ကို လေ့လာပြီး တားမြစ်ခံထားရတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့ လွတ်လမ်းမရှိဘဲ “သူ့ရဲ့ပလက်ဖောင်းမှာ ပိတ်မိနေတယ်” နဲ့ နောက်ထပ် လစ်သူရေနီးယန်း ဆွေးနွေးမှုတွေမှာ ဖခင်ဖြစ်သူကို လွှဲပြောင်းပေးအပ်တဲ့ ကိစ္စရပ်ကို လေ့လာရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ကျင့်သားရလာပါပြီ။ Talmud
ဤအရာများသည် အမျိုးသမီးများကို ပိုမိုသွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသော သုံးသပ်ချက်များဖြစ်သည် (နှင့်နောက်လိုက်များ၊ တူညီသောအရာအကြောင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ ကော်လံများတွင်ကြည့်ပါ၊ 104 နှင့်-315). ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ လစ်သူယေးနီးယန်းများသည် BH တွင် ထိုသို့သောခံစားချက်များမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်ဟု ပြောရန်မလိုပါ။ အဲဒီ telenovela ရဲ့ ဒါရိုက်တာတွေကိုတောင် အကြံဥာဏ်တချို့ ပေးခဲ့တယ်- ဥပမာ၊ ညီအစ်ကိုရဲ့ ဒုတိယဇနီးကို သတ်ပြီး သူ့ဝမ်းကွဲကလေးရဲ့ ဟေဗြဲအမေဖြစ်တဲ့ သူ့ဝမ်းကွဲအမေဖြစ်တဲ့ ဟီးဘရူးရဲ့ ဝမ်းဗိုက်ကို ဓားနဲ့ထိုးရင် သူတို့က ကောင်းကောင်းလုပ်လိမ့်မယ်။ Garma မှ အသတ်ခံရသော ကျွန်နှင့် အလွတ်တစ်ဝက်သည် ဝိုင်၏အဆင်းသဏ္ဌာန်တူသော ဒပ်မပါသော စုပ်ရေသုံးချောင်းပါသော နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် မစ်ဝေ့တွင် နှစ်မြှုပ်ခြင်းကြားတွင်ရှိသည်။ သူတို့ဟာ အကောင်းဆုံးတွေကနေ သင်ယူနိုင်တယ်။ရာထူး. ဒါက ဆွေးနွေးမှုကို ကြွယ်ဝစေပြီး ပိုပြီး စွဲဆောင်မှုဖြစ်စေမှာပါ။
ဤဝေဖန်မှုများသည် Talmud နှင့် ၎င်း၏ကျောင်းသားများကိုသာ ဦးတည်သည်မဟုတ်။ ကော်လံတစ်ခုတွင် 89 အလားတူ ဝေဖန်ချက်တစ်ခုကို ဥပမာတစ်ခုပေးခဲ့ပြီး၊ ယခုတစ်ကြိမ်တွင် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Technion မှာရှိတဲ့ သွေးပြွန်အကြောင်း လူသိများတဲ့ ဇာတ်လမ်း (ဖြစ်နိုင်သလို ဖန်တီးခဲ့တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်)။ အဲဒီကနေ ကူးယူလိုက်မယ်။
ပြောတယ်။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာဌာနတွင် စီးဆင်းမှုဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုရလဒ် ထွက်ပေါ်လာသည့် Technion မှ ပါမောက္ခ Haim Hanani ၏ အစပြုမှုတွင် ကျောင်းသားများအား Eilat မှ Metula သို့ သွေးသယ်ဆောင်မည့် ပိုက်ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခိုင်းခဲ့သည်။ မြှုပ်နှံရန် မြေဆီလွှာတွင် မည်သည့်ပစ္စည်း၊ အချင်းနှင့် အထူရှိသင့်သနည်းဟု မေးမြန်းကြသည်။ ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ ဇာတ်ကြောင်းပြောသူတွေ (ဒီကိစ္စအတွက် ကိုယ်ကျင့်တရားအရ ထိတ်လန့်တကြား အံ့ဩသွားသူတွေရဲ့ နားနဲ့ ငါကိုယ်တိုင် ကြားခဲ့ရဖူးပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်လို့ ပြောနေစရာတောင် မလိုပါဘူး) ဟိုးအရင်ကတည်းက ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ Technion ရဲ့ နည်းပညာရှင် ကျောင်းသားတွေက ဘယ်လို ညည်းတွားနေကြတာလဲ။ လူသားဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦး (ကျား၊ မနှင့် အိမ်တွင်းစီးပွားရေးဆိုင်ရာ PhD များနှင့် မတူဘဲ ၎င်းတို့တွင် အလွန်ဖွံ့ဖြိုးပြီး ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ အာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့၏ ဆောင်းပါးများကို ဂျာနယ်များ၏ စနစ်များသို့ တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်ပေးမည့် ပြွန်တစ်ခုကို ဒီဇိုင်းထုတ်သည့်အခါ) စာမေးပွဲကို ဖြေရှင်းပြီး မျက်ခွံမအုပ်ဘဲ တင်သွင်းပါ။ ဘာကြောင့် ဒီလိုသွေးပြွန်ကို လိုအပ်တာလဲလို့ မေးပါတယ်။ အံ့ဩမှုကို တိုးပွားစေရုံမျှမက၊ ထိုသို့သော စာမေးပွဲသည် Technion သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် လူသားပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များကို နိဒါန်းပျိုးစေသည်ဟု ဆိုသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ဤသုံးသပ်ချက်ကို အလွန်အလေးအနက်ထားပုံရသည်။
အချေအတင်ပြောလို့ရတဲ့ စာမေးပွဲစာရေးဆရာရဲ့ အရသာနဲ့ဟာသမေးခွန်းကို ကျော်လွန်ပြီး (ကျွန်တော့်မျက်လုံးထဲမှာတော့ အတော်လေးကို ကျေနပ်စရာကောင်းပေမယ့်) ဝေဖန်ချက်က ကျွန်တော့်အတွက်တော့ မိုက်မဲလွန်းလှပါတယ်။ ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးမှာ ပြဿနာကဘာလဲ။ ကထိကသည် ချွေးတပ်စခန်းတစ်ခုစီစဉ်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး သွေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာကို ဖြေရှင်းရာတွင် ကျောင်းသားများကို ကူညီပေးနေသည်ဟု မည်သူမဆို တွေးကြည့်ကြပါသလား။ စာမေးပွဲဖြေတဲ့ ကျောင်းသားတွေက ဒီအခြေအနေနဲ့ ဆန္ဒပြတာကို စိတ်ကူးကြည့်ကြသလား။ ထိုသို့သော စာမေးပွဲ၏ တည်ဆောက်မှုနှင့် ဖြေရှင်းချက်သည် အကျင့်ယိုယွင်းမှု၊ ကထိက သို့မဟုတ် ကျောင်းသားများ၏ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ သိမ်မွေ့မှုအဆင့်ကိုပင် ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းမရှိပါ။ စကားမစပ်၊ ဤရယ်စရာကောင်းသောဝေဖန်မှုသည်ပင် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ထိလွယ်ရှလွယ်မှုအဆင့်ကို ထင်ဟပ်ခြင်းမရှိပါ။ အများစုမှာ ပြင်းထန်သော နိုင်ငံရေးမှန်ကန်မှုနှင့် မလိုအပ်သော ခံစားချက်များအတွက် အလွန်မိုက်မဲသော ကြေငြာချက်အခွန်ပေးဆောင်မှုဖြစ်သည်။
စာမေးပွဲတစ်ခုတွင် ယင်းမေးခွန်းကို တင်ပြခြင်းသည် မှန်ကန်ပြီး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုရှိမရှိ မေးခွန်းအပြင်၊ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး မျက်စိတစ်မှိတ်ပင် မဖြေရှင်းနိုင်သော ကျောင်းသားများသည် ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေမျိုးကို ဖြတ်သန်းသွားသော ဟာလခပညာရှင်နှင့် အလွန်ဆင်တူကြောင်း ငြင်းဆိုလိုပါသည်။ အေးခဲနေတဲ့ မျက်ခွံနဲ့ ဖော်ပြခဲ့တာ။ အဲဒါက မေးတာများပါတယ်။ အကယ်၍ အကြောင်းအရာသည် halakhic သို့မဟုတ် သိပ္ပံနည်းကျနည်းပညာဖြစ်ပြီး ဤနေရာတွင် မည်သူမျှ လူသတ်ရန် သို့မဟုတ် သွေးဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း လူတိုင်းအား ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသာစေကာမူ ၎င်းတို့၏နှလုံးကြိုးများ တုန်လှုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရွှင်မြူးခြင်းအတွက် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြောင်းပြချက်မရှိပေ။ စစ်မှန်သောဖြစ်ရပ်များအတွက် စစ်ဆေးမှုများကို ချန်ထားခဲ့ခြင်းက ပိုကောင်းပါတယ်။ ကြိုးတွေလှုပ်နေတဲ့သူရှိရင် ကောင်းတာပေါ့။ လူတိုင်းနှင့် သူ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံမှာ ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်း မည်သူမျှ ပြီးပြည့်စုံသည်မဟုတ်။ သို့သော် လူ၏အကျင့်စာရိတ္တကို ရောင်ပြန်ဟပ်ကာ တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိဘဲ ယင်းကို အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားမှု၏ အရိပ်အယောင်တစ်ခုအဖြစ် မြင်ခြင်းသည် မကောင်းတဲ့ဟာသတစ်ခုဖြစ်သည်။
" လိမ္မာပါးနပ်တဲ့ရေခဲ၊ သူ ဘာကို အဓိပ္ပါယ်မဲ့မြင်ခဲ့တာလဲ "
Moshe Rabeinu အကြောင်း စောဒကတက်ခဲ့တဲ့ Korach Zatzokal ရဲ့ ဒဏ္ဍာရီထဲက အစွန်းအထင်းကိုလည်း မှတ်မိနိုင်ပါတယ်။ရှာဖွေသူကောင်းဆာလံကျမ်း):
“ဇိမ်ပလ္လင်” တွင် မောရှေနှင့် အာရုန်အကြောင်း နောက်ပြောင်နေသည့် ရေခဲများရှိသည်။
ရေခဲက ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် စုဝေးကြပြီး၊ ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် သူတို့အတွက်ရေခဲကို စုဆောင်းကြစေဟု မိန့်တော်မူပြီးလျှင်၊ လူရွှင်တော် စကားကို စ၍ပြောပြီးလျှင်၊ ငါ့ပတ်ဝန်းကျင်၌ မုဆိုးမတယောက်ရှိ၍ မိဘမဲ့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်၊ သူ့တွင် လယ်ကွက်တစ်ခုရှိသည်။ လယ်ထွန်ရန်လာ၍ မောရှေက၊ သင်သည် နွားနှင့်မြည်းကို မထွန်ရဟု မိန့်တော်မူ၏။ မျိုးစေ့ကြဲခြင်းငှါလာ၍ “မင်း၏ရင်သားသည် မျိုးစပ်သောမျိုးစေ့ကို မကြဲရ” ဟုပြောလေ၏။ ရိတ်ပြီး အမှိုက်ပုံလုပ်ရန် လာ၍ မေ့လျော့ခြင်း အစုအဝေးနှင့် ဆံပင်တုကို ထားလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ အုတ်မြစ်ချခြင်းငှါလာ၍ အလှူငွေနှင့် ပထမဆယ်ဘို့တဘို့နှင့် ဒုတိယဆယ်ဘို့တဘို့ကို ပေးလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ သူ့အပေါ် စီရင်ချက်ချပြီး သူ့အား ပေးလိုက်သည်။.
ဒီညံ့ဖျင်းမှုက ဘာကိုလုပ်တာလဲ။ လယ်ကွက်ကို မတ်တတ်ရပ်ရောင်းပြီး သိုးနှစ်ကောင်ကို ၀တ်ဆင်ကာ နွားများကို ပျော်ပါးစေခဲ့သည်။ သားဦးမှစ၍ အာရုန်သည် လာ၍ သားဦးကို ငါ့အား ပေးလော့ဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ဘုရားသခင်က၊ သင်၏ သိုးစုနှင့် သင်၏ သိုးစုတွင် မွေးဖွားသော သားဦးအပေါင်းတို့သည် သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားထံတော်၌ အပ်နှံကြလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ သူ့အပေါ် စီရင်ချက်ချပြီး သူ့ကို မွေးဖွားပေးခဲ့တယ်။ ခုတ်ထစ်ရိတ်ရမည့်အချိန်ရောက်ပြီ- အာရုန်သည်လာ၍ ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည်ကား၊
သူ​က​လည်း၊ ဒီ​လူ​ကို သတ်​ပြီး​စား​ရ​တဲ့​အတွက် ငါ့​မှာ ခံ​ရပ်​နိုင်​စွမ်း မရှိ​ဘူး။ သတ်ပြီးမှ၊ အာရုန်သည် လာ၍၊ လက်ရုံး၊ ပါး၊ ဗိုက်ကို ပေးတော်မူပါဟု လျှောက်လေ၏။ သူမ က ၊ ငါ သူတို့ကို သတ် ပြီး တဲ့ နောက် မှာတောင် သူ့ကို မဖယ်ရှား ခဲ့ ဘူး ၊ သူတို့က ငါ့ကို သပိတ်မှောက် တယ် ။ အာရုန်က သူ့အား ဤသို့ဆိုသည်– “ဒါဆိုဒါက ငါ့ဥစ္စာပဲ၊ ဘုရားသခင်က “အစ္စရေးနိုင်ငံမှာ သပိတ်မှောက်မှုတိုင်းက မင်းပိုင်လိမ့်မယ်” လို့ပြောတယ်။ Natlan သည် သူ့ထံသို့သွား၍ သမီးနှစ်ယောက်နှင့်အတူ ငိုကြွေးကျန်ရစ်ခဲ့သည်။.
ဒီလိုနဲ့ပဲ သူမ ဒီဒုက္ခထဲကို ရောက်သွားတယ်။ ဒီတော့ သူတို့က Gd မှာ ချိတ်ထားတယ်။!
တကယ်ကို ကြေကွဲစရာပဲ မဟုတ်လား ။ ဤနေရာတွင် ကွာခြားချက်ရှိသော်လည်း အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော သုံးသပ်ချက်များနှင့် အနည်းငယ် သတိရနေပါသည်။ Ice ရဲ့ ဝေဖန်ချက်က အဲဒီထဲမှာ တကယ်ရှိပါတယ်။ သူမသည် အကြောင်းအရာများကို ဆက်စပ်၍ ကြေကွဲဖွယ်ရာ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို ပုံဖော်နိုင်သော်လည်း၊ ထိုသို့သော ဇာတ်လမ်းသည် မူအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် အမှန်တကယ်ပင် ထိုသို့သော အခြေအနေအတွက် ဟာလာခရစ်ခ်ျ လမ်းညွှန်ချက် အမှန်ပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤနေရာတွင် ဟာလခဟ်၏ အကျင့်စာရိတ္တအတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခု ရှိနေပြီး၊ ဤသည်မှာ လေးနက်သော တောင်းဆိုချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အရင်က မင်းကို ငါ အကြိမ်ကြိမ်ပြောဖူးတယ်။ အစ္စရေးတို့ ကစားခဲ့သည်။ဟာလခဟ်၏ ကိုယ်ကျင့်တရား ထုံကျဉ်မှုနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဇာတ်လမ်းများကို လုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့သူ ဂျေရုဆလင်မှ ဓာတုဗေဒပညာရှင်၊ ဒီလိုဇာတ်လမ်းမျိုးမဟုတ်သလို ဖန်တီးထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိသာထင်ရှားလာတဲ့အခါ ဘာသာရေးက သက်ပြင်းတစ်ချက်ချမိပေမယ့် အဲဒါက ဘာကြောင့်ဆက်စပ်မှုရှိတယ်ဆိုတာ အမြဲတွေးနေမိပါတယ်။ ဧကန်စင်စစ် ဟာလဟ်သည် လူမျိုးခြား၏အသက်ကို ကယ်တင်ရန် ရှာဘတ်၏နေရာကို တားမြစ်ထားသည်။ အမှန်မှာ၊ Cohen သည် ဇနီးဖြစ်သူအား ခင်ပွန်းဖြစ်သူ၏ မုဒိမ်းကျင့်ခြင်းကို ခံရရန် ဥပဒေ လိုအပ်သည်။ ဒါတကယ်မဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် ဒါဟာ လုံးဝတရားဝင်တဲ့ ဝေဖန်မှုပါ။
ဤသဘောအရ၊ Shachak နှင့် Korach ၏ဝေဖန်ချက်များသည် တွေးခေါ်မှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး အထက်တွင်တွေ့ခဲ့ရသော ဝေဖန်မှုများနှင့် အလွန်ဆင်တူပြီး သူ့အပေါ် အလွန်သင့်လျော်သော ယောနိသောမနသိကာရပင်ဖြစ်သည်။ လူတွေရဲ့ အကျင့်စာရိတ္တအဆင့်အတန်း ဒါမှမဟုတ် ဟာလဟာဟ်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။
စင်ပေါ်မှာ သွေးပြွန် သို့မဟုတ် telenovela ၏ သုံးသပ်ချက်များနှင့် ပြဿနာများကို အာရုံစိုက်ကြပါစို့။ ဒါက တကယ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ ယူဆရတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒီလို တကယ့်ဖြစ်ရပ်မျိုးနဲ့ ကြုံလာရရင် အဲဒါကို လျစ်လျူရှုထားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ပါဝင်သူအားလုံးအတွက် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိသာထင်ရှားသော ကိစ္စရပ်၏ နိမိတ်ပုံသဘာ၀ကြောင့်ဖြစ်ပြီး ဆွေးနွေးမှု၏ ဆက်စပ်မှုကြောင့် ဤနေရာတွင် မနာလိုမှု ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ယင်းကိစ္စများ ပေါ်ပေါက်လာရခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး- ပညာရှင်ဖြစ်သည်။ အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်တွင် မေးခွန်းတစ်ခုအား ကွန်ပြူတာနည်းပညာဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအဖြစ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပြီး တွက်ချက်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ကြပါ။ (လူတိုင်းတွင် ထိုသို့သောအရာမရှိဟု ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်တွင် ကျောင်းသား၏စမ်းသပ်ခြင်း စွမ်းရည်များ)။ စင်ပေါ်မှာ telenovela လည်း အလားတူပါပဲ။ ဤအရာသည် halakhic ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို ထက်မြက်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စိတ်ကူးယဉ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အားလုံးသိသည်။ တွေးခေါ်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်ကို အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်နေသကဲ့သို့ ဆက်ဆံခြင်းသည် ကလေးဆန်သော ကိစ္စမဟုတ်လော။ ကလေးများသည် ဇာတ်လမ်းကို တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်ကဲ့သို့ သဘောထားကြသည်။ အရွယ်ရောက်သူတိုင်း နားလည်သင့်သည် ။ ကျွန်တော့်အမြင်အရ၊ ၎င်းသည် Gamla Farha (Mechot XNUMX:XNUMX နှင့် Yevamot Katz XNUMX:XNUMX) ကဲ့သို့သော Talmudic ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများနှင့် ဆင်တူသည်။ ဖြစ်ပျက် အကြောင်းအရာကို ဂရုပြုသောအခါ၊ ဤအရာသည် ဖြစ်ရပ်မှန် သို့မဟုတ် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်ဟု မည်သူမျှ မပြောဆိုကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြစ်သင့်သည်။ ဤအရာများသည် သိပ္ပံသုတေသနတွင် ဓာတ်ခွဲခန်းကိစ္စများကဲ့သို့ halakhic သဘောတရားများကို ပြုပြင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် စိတ်ကူးယဉ်ဖြစ်ရပ်များ (ကြည့်ပါ၊ဆောင်းပါးများ အိုကီမက်စ်)။
အတိုချုပ်အားဖြင့်၊ ဤသုံးသပ်ချက်များနှင့် ပြဿနာမှာ လူတစ်ဦးသည် ဤနေရာတွင် အမှန်တကယ် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကဲ့သို့ သူ့ရှေ့ရောက်လာသော စိတ်ကူးယဉ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို ဆက်ဆံရမည်ဟု ၎င်းတို့က ယူဆထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဲဒီလို အခြေအနေတွေကို ဖော်ပြတဲ့ ရုပ်ရှင် ဒါမှမဟုတ် စာအုပ်ကနေ ဥပမာပေးနိုင်ပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာ သို့မဟုတ် ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် မည်သူက မြတ်နိုးမည်မဟုတ်ကြောင်း သတိပြုပါ။ ဘယ်လိုကွာခြားလဲ။ ရုပ်ရှင် သို့မဟုတ် စာအုပ်တစ်အုပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုသို့သောခံစားချက်များကို တွေ့ကြုံခံစားပြီး အခြေအနေတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိသင့်သည်။ ဤအရာအတွက် အဖြေသည် ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ယူဆချက်ဖြစ်သည်- 1. အကြောင်းအရာ၏အမည်သည် အနုပညာဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ စားသုံးသူ (ကြည့်ရှုသူ သို့မဟုတ် စာဖတ်သူ) သည် အခြေအနေကို ထည့်သွင်း၍ တွေ့ကြုံခံစားသင့်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ဤသည်မှာ အနုပညာ လွတ်မြောက်ခြင်း၏ အနှစ်သာရဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်းသည် ပညာရှင် သို့မဟုတ် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာတွင် မရှိပါ။ 2. ထိုသို့သော စိတ်လှုပ်ရှားမှုသည် အမျိုးသားများ (သို့မဟုတ်) အမျိုးသမီးများတွင် ဖြစ်ပွားသည်မှာ သဘာဝပင်ဖြစ်သော်ငြားလည်း ၎င်းသည် တန်ဖိုးမရှိပါ။ ဒီလိုဖြစ်လာရင် ကောင်းပြီ (ဘယ်သူမှ မပြည့်စုံဘူးဆိုတာ သတိရပါ)။ ဒါပေမယ့် အကျင့်စာရိတ္တနာမည်နဲ့ လူတွေက သူတို့အတွက် ဖြစ်ရမယ်လို့ တောင်းဆိုတာဟာ လုံးဝကို ကွဲပြားပါတယ်။ အကျင့်စာရိတ္တ ချို့ယွင်းမှု မရှိတဲ့သူကို မြင်ရတာ ကျွန်တော့်မျက်လုံးထဲမှာ တကယ်ကို အဓိပ္ပါယ်မဲ့ပါတယ်။
ဖြစ်ရပ်မှန်- အဆက်ဖြတ်ခြင်း၏ အရေးပါမှု
တွေးခေါ်မှုကိစ္စတွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပါဝင်ပတ်သက်မှုသည် အကောင်းဆုံးမှာ ကလေးဆန်သောကိစ္စဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော် စောဒကတက်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါထက်၊ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အတိုင်းအတာလည်း ရှိတယ်လို့ အခု ကျနော် ငြင်းခုံချင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါ ပါရဂူကျောင်းသားများ၏ ဝေဖန်မှုများ ပေါ်ပေါက်လာသောအခါ၊ halakhic ပညာသင်ဆုနှင့် ပတ်သက်သည့် အခြေအနေမှ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တွယ်တာမှု၏ အရေးပါမှုတို့ကို အဖန်ဖန် အထပ်ထပ် ထည့်သွင်းရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ ထိုသို့သော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပါဝင်ပတ်သက်မှုသည် တန်ဖိုးမရှိရုံသာမကဘဲ အမှန်တကယ်ပင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေပါသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပါဝင်ပတ်သက်မှုသည် မှားယွင်းသော halakhic (နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ) ကောက်ချက်များအား ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သူ့ခံစားချက်ကြောင့် ဒီအမှုကို ဆုံးဖြတ်တဲ့ တရားသူကြီးက ဆိုးရွားတဲ့ တရားသူကြီးပဲ (တကယ်တော့ တရားသူကြီးက လုံးဝ မဆုံးဖြတ်ပါဘူး။
ဤတွင် ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ရှေ့မှောက်တွင် ရောက်ရှိလာသော တကယ့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအကြောင်း လူသားကိုးကားချက်အကြောင်း ပြောထားပြီးဖြစ်သည်၊ စိတ်ကူးယဉ်ကိစ္စမျှသာမဟုတ်ကြောင်း သတိပြုပါ။ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ကပ်ဘေးတစ်ခုမှာ အတူကျဆုံးသွားတဲ့ ညီအကို မောင်နှမ ဖြစ်ရပ်မျိုး ကြုံလာရရင် ဒါဟာ လက်တွေ့မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ တကယ့်ဖြစ်ရပ်ပါ၊ ဒါကြောင့် ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ လူသားတွေရဲ့ အတိုင်းအတာအထိ အာရုံခံစားနိုင်မှုဟာ တန်ဖိုးရှိရပါမယ်။ ဤနေရာ၌ ဤကိစ္စရပ်အား အဆင့်တိုင်းတွင် တစ်ပြိုင်နက် ကုသရာတွင် တန်ဖိုးနှင့် အရေးကြီးသည်- ဉာဏ-ဟာလခ၊ ဉာဏ-သီလနှင့် လူသား-အတွေ့အကြုံ။ တကယ့်အခြေအနေမှာတောင် ပထမလေယာဉ်ကို အာရုံစိုက်ပြီး ကျန်နှစ်ခုကို ဖြတ်ဖို့ ပထမအဆင့်မှာ သင့်လျော်ပါတယ်။ ခုံသမာဓိလူကြီးသည် သူ့ရှေ့ရောက်လာမည့်အမှုကို အေးအေးဆေးဆေး စဉ်းစားသင့်သည်။ ဟာလခ ပြောတာဟာ စိတ်ခံစားချက်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး (ကိုယ်ကျင့်တရားက ပြောတာတောင် မဟုတ်ဘူး)၊ အဲဒါက ကောင်းတယ်။ ခုံသမာဓိသည် စိတ်ကို ချုပ်တည်းထားခြင်းဖြင့် ဥပဒေကို ဖြတ်တောက်သင့်ပြီး ထို့ကြောင့် Torah ၏ အမှန်တရားကို ညွှန်ပြခွင့်ရှိသည်။ အအေးဓာတ်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးနောက် စင်မြင့်တွင်၊ အခြေအနေနှင့် ၎င်း၏ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် လူသားဆိုင်ရာ ရှုထောင့်များထဲသို့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝင်ရောက်နိုင်သည့်အပြင် ယင်းရှုထောင့်တွင်လည်း ဆန်းစစ်ရန် နေရာရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကနဦး halakhic ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ရွေးချယ်စရာများစွာကို ပေါ်ပေါက်လာသောအခါ၊ ၎င်းတို့ကြားတွင် ဆုံးဖြတ်ရန်နှင့် လက်တွေ့ကျသော စီရင်ချက်ကို ရွေးချယ်ရန်အတွက် စိတ်ခံစားမှုနှင့် လူသားနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။ စိတ်ခံစားမှုသည် ယုတ္တိဗေဒခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင် မပါဝင်သင့်သော်လည်း အများစုမှာ ၎င်းနောက်မှ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် halakhic သက်ရောက်မှုများမရှိသော်လည်း၊ သင့်ရှေ့တွင်ရှိသောသူ၏ဆင်းရဲဒုက္ခကို မျှဝေခြင်းနှင့် စာနာနားလည်ခြင်းတွင် အမှန်တကယ်တန်ဖိုးရှိကြောင်း မြင်နိုင်သည်။ သို့သော် ဤအရာအားလုံးသည် အပြိုင်လေယာဉ်များပေါ်တွင် ဖြစ်ပျက်ရမည် ဖြစ်ပြီး ကနဦး halakhic ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် ၎င်းတို့သည်လည်း နောက်ကျနေမည်ကို လိုလားပါသည်။ စီရင်ချက်တွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပါဝင်ပတ်သက်မှုမှာ လုံးဝမလိုလားပါ။
ကျွန်ုပ်အကြိမ်များစွာပြုလုပ်ပြီးသော နောက်ထပ်တောင်းဆိုမှုတစ်ခုအား အသေးစိတ်ဖော်ပြ၍ ဤနေရာကို ကျွန်ုပ်ပြန်မည်မဟုတ်ပါ (ဥပမာ ကော်လံတွင် ကြည့်ပါ။ 22နှင့်ကော်လံ၏စီးရီး၌ 311-315) ထိုအကျင့်စာရိတ္တသည် စိတ်ခံစားမှုနှင့် ဘာမှမဆိုင်ပါ။ ကိုယ်ကျင့်တရားသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စထက် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်ခံစားမှုသည် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ဦးတည်ချက် (စာနာမှု) ၏ ညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် အလွန်ပြဿနာတက်သော ညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းကို မလိုက်နာရန် ဂရုပြုဝေဖန်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ သူ့ကို လေးစားပြီး သံသယရှိပါ။ တစ်နေ့တာ၏အဆုံးတွင်၊ နှလုံးသား၌မဟုတ်ဘဲ ခေါင်းတွင်ဆုံးဖြတ်သင့်သည်၊ သို့သော် ဦးခေါင်းသည် နှလုံးသားပြောသည်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ ငြင်းခုံမှုမှာ အတွေ့အကြုံ ခံစားမှု အာရုံ၌ ခွဲခြားသိမြင်ခြင်းမှာ အဓိပ္ပါယ်မရှိပေ။ ဤသည်မှာ လူသားတို့၏ စရိုက်လက္ခဏာ ဖြစ်သောကြောင့် အမှန်ပင် ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်တန်ဖိုးမရှိပါ၊ ၎င်းကိုမရရှိနိုင်သောသူများသည်၎င်း၏ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်တန်ဖိုးအခြေအနေအတွက်မစိုးရိမ်သင့်ပါ။
ယင်းအချက်ကြောင့်၊ ကနဦး halakhic ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးနောက် ဒုတိယအဆင့်တွင်ပင် စိတ်ခံစားမှုအတွက် သိသာထင်ရှားသော နေရာမရှိဟု ကျွန်တော် စောဒကတက်ပါသည်။ အကျင့်စာရိတ္တအတွက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကောင်း, ဒါပေမယ့်စိတ်ခံစားမှုဆီသို့မဟုတ် (se ။ ဒါပေမယ့်ဖြစ်ကောင်းညွှန်ပြချက်တစ်ခုအဖြစ်စသည်ဖြင့်) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဝင်ပတ်သက်မှုသည် မသင့်လျော်သောလှည့်ဖြားမှုများနှင့် တွေးခေါ်ပုံသွေဖည်မှုများနှင့် မှားယွင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းအတွက် စမ်းသပ်ဆေးညွှန်းဖြစ်သည်။
ဤအရာအားလုံး၏ နိဂုံးချုပ်ချက်မှာ halakhic Talmudic ပြဿနာကို လေ့လာသောအခါ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွင် တန်ဖိုးမရှိသလို၊ ၎င်းရှိလျှင်ပင် ထိုကဲ့သို့သော စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ကျော်လွှားရန်ပင် ကြိုးစားသင့်သည် (ကျွန်တော်က မကျော်လွှားနိုင်သေးသူများအကြောင်း ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်၊ ၎င်းကို အသုံးချပါ။) လက်တွေ့ကျသော halakhic စီရင်ထုံးများတွင် (ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့တွင် ရောက်ရှိလာသော ကိစ္စရပ်တစ်ခုအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု)၊ စိတ်ခံစားမှုနှင့် အကျင့်စာရိတ္တကို ဆိုင်းငံ့ထားသင့်ပြီး ဒုတိယအဆင့်တွင် နေရာအချို့ (အထူးသဖြင့် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရန်၊ စိတ်ခံစားမှုနည်းစေရန်)။
ထိုသို့သော စိတ်ကူးစိတ်သန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများတွင် လူသားအား စိတ်ကူးစိတ်သန်းဖြင့် မဆက်ဆံဘဲ လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်များနှင့် ဆက်စပ်၍ပင် ထိုသို့ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း ကိရိယာအဆင့်တွင် အငြင်းအခုံတစ်ခုရှိသည်။ အရမ်းသံသယဖြစ်မိတယ်။ ကောင်းချီးခုနစ်ပါးအတွက် ကောင်းသောစကားတစ်ခွန်းနှင့်တူပြီး ၎င်း၏မှန်ကန်မှုကို ညွှန်ပြခြင်းမရှိပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ယင်းကို တိုင်ကြားသူ မည်သူမဆို သူ့စကားအတွက် သက်သေပြသင့်သည်။
လက်မှုပညာသည်များ၏အလေ့အထနှင့် ပတ်သက်၍ အလားတူတောင်းဆိုနိုင်သည်။ အနုပညာရှင်တစ်ဦး၊ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် အမျိုးသမီးနှင့် ဆက်ဆံသူတစ်ဦးသည် "သူ့ကျွန်များကို နှောင့်ယှက်ခြင်း" ဖြစ်သောကြောင့် အခြားအမျိုးသားများကို တားမြစ်ထားသည့်အရာများကို ခွင့်ပြုထားကြောင်း Gemara က ဆိုသည်။ သူ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်တွင် မအားမလပ်ဖြစ်ခြင်းသည် သူ၏စိတ်ခံစားမှုကို မှုန်ဝါးစေကာ ပြစ်မှားမှုနှင့် တားမြစ်ထားသော ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများကို တားဆီးပေးသည်။ အချစ်ရေးနဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မဟုတ်တဲ့ နောက်ခံအမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့တွေ့တဲ့အခါ မီးယပ်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့ လိင်က ပိုဆိုးသလားတော့ မသိပါဘူး။ ဤအရာသည် မတူညီသောအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်သံသယရှိသော်လည်း ၎င်းကိုစစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ လူတို့သည် ခွဲခွာခြင်းနှင့် အဆက်ဖြတ်ခြင်းကို မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကို သိရှိကြပြီး ဤသဘောအရ Dayan သည်လည်း Abidathiyahu Tridi တွင် သင်ယူသည်။ လူတစ်ဦးသည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းခွင်တွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်သောအခါတွင် သူ၏စိတ်ခံစားမှုများကို မည်သို့ခွဲထုတ်ရမည်ကို သိရှိပြီး အခြားအကြောင်းအရာများတွင် ၎င်းတို့သည် ပို၍ ညစ်ပတ်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူ့အနုပညာကို နစ်မွန်းနေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဟာ halakhic လေ့လာမှုမှာ အထက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေတွေထက် ပိုကျယ်ပြန့်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပန်းချီဆရာအတွက် ဒါတွေက အမျိုးသမီးတွေနဲ့ တကယ့်အခြေအနေတွေဖြစ်ပြီး ပညာရှင်အတွက်ကတော့ ဒါတွေဟာ စိတ်ကူးယဉ်ဖြစ်ရပ်တွေပါ။ ထို့ကြောင့် ပန်းချီဆရာ၏ စိတ်ခံစားမှုများ လျော့ပါးသွားသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိလျှင်ပင် ဤသည်မှာ ပညာရှင်၌ ဖြစ်ပျက်နေသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ တရားသူကြီးသည် တကယ့်အမှုများကို ရင်ဆိုင်ရသော်လည်း ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အခြေအနေတွင် ထိုသို့လုပ်ဆောင်သောကြောင့် ၎င်း၏ခံစားချက်များကို ဖြတ်တောက်ပစ်သည့် တရားသူကြီးနှင့် ပို၍ဆင်တူသည်။ အနုပညာလောကထဲမှာ ဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
ထိုသို့သော အခြေအနေများနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး သက်ဆိုင်ရာ လူ့စိတ်ခံစားချက်များကို သူ့ထံတွင် အပြည့်အ၀ မခံစားမိသော သင်ယူသူသည် အခြေအနေကို အပြည့်အ၀ မ၀င်ရောက်ကြောင်း စောဒကတက်နိုင်ပါသည်။ ဤသည်မှာ ပညာရေးအဆင့်တွင်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ကျင့်တရားအဆင့်တွင်သာ ငြင်းခုံခြင်းဖြစ်သည်။ သူက သင်ယူမှု ညံ့ဖျင်းပြီး အကျင့်ပျက်သူ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုထားပါတယ်။ အဲဒီလိုတော့ မထင်ပါဘူး။ လူတစ်ဦးသည် လူ့အသုံးအနှုန်းများတွင် မပါဝင်သော်လည်း ပညာရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေတစ်ခုတွင် သေချာပေါက် ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အငြင်းအခုံသည် စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာလေယာဉ်များ (ဒုတိယအဆင့်မှလွဲ၍) မပါဝင်သည့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်-နည်းပညာဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်တစ်ခုအဖြစ် ဟာလာဟာ၏ခံယူချက်အပေါ်တွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ဘာပဲပြောပြော ကိုယ်ကျင့်တရား ချို့ယွင်းချက် ကိုတော့ ဒီနေရာမှာ မမြင်မိပါဘူး။
 အမျိုးသမီးဇာတ်ရုပ်နဲ့ ပတ်သက်တာတော့ သေချာမသိပါဘူး။ အမျိုးသမီးများသည် ငယ်စဉ်ကတည်းက ဤပြဿနာများကို အများအားဖြင့် ကျင့်သားရလေ့မရှိသောကြောင့် ဆန်းသစ်သော အရာများကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။
 ရလဒ်က ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ ကြိုဆိုပါတယ်။ Technion မှ ကျောင်းသားအချို့သည် လူသားများကို လေ့လာရန် အန္တရာယ်မဖြစ်သည်မှာ သေချာပါသည်။ သို့သော် ဤကိစ္စနှင့် သွေးကြောကိစ္စကြား ဆက်စပ်မှု မရှိပေ။ အဆိုပါကိစ္စသည် ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်သည့် ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာကို သက်သေမပြဘဲ၊ ထိုကဲ့သို့သော ပြဿနာမျိုးရှိခဲ့ပါက၊ လူသားပညာလေ့လာမှုများက ၎င်း၏အဖြေအတွက် မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ အထောက်အကူမပြုနိုင်ပေ။
ငြင်းလို့မရတဲ့ အဖြေတစ်ခုက ကမ္ဘာနဲ့ ပတ်သက်တယ်။
45 "စိတ်နှင့်နှလုံးသား - Halacha လေ့လာမှုနှင့် တရားစီရင်ခြင်းဆိုင်ရာ အတွေးအမြင်များ (ကော်လံ 467)"
ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသော halakhic ကိစ္စသည် XNUMX ခုနှစ်ဖြစ်ရပ်များအတွင်း Motza ရှိ Maklef မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များသတ်ဖြတ်မှုအပြီးမှန်ကန်စွာမှတ်မိပါကကျွန်ုပ်မှန်ကန်စွာမှတ်မိပါက၊ လက်တွေ့တွင်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
Nissan 13 - 04/2022/14 39:XNUMX တွင် ဆယ်ခုမြောက်
Ahiezer HG Lag ရှိ အဖြေများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော Safed ရှိ Unger မိသားစုကို သတ်ဖြတ်ခြင်းအား ရည်ညွှန်း၍ မှားသွားပါသည်။
Nissan 13 - 04/2022/14 53:XNUMX တွင် ဆယ့်သုံးကြိမ်မြောက်
တုံ့ပြန်မှုကို သင်ဘယ်လိုရှာမလဲ။ အရင်းအမြစ်တစ်ခုတွေ့ချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။
Nissan 13 - 04/2022/17 23:XNUMX တွင် ဆယ့်သုံးကြိမ်မြောက်
အဲဒီမှာ ပြောခဲ့တာတွေကို အကျဉ်းချုပ် ပြောပြပါမယ်။
တစ် ကော်လံတွင် ပေါ်လာသည့် အမှု-
[ယောက်ျားက သူ့တူမနဲ့ တခြားမိန်းမနဲ့ လက်ထပ်တယ်။ သူသေရင် သူ့အစ်ကိုက တူလေး (အပျိုပေါက်) နဲ့ မနေနိုင်တဲ့အတွက် သူနဲ့ လိုအပ်နေတဲ့ တခြားအမျိုးသမီးကို ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနဲ့ အာမခံပေးခြင်း (တားမြစ် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း) မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရပါတယ်။ တူဖြစ်သူ၏သမီးသည် ခင်ပွန်းမဖြစ်မီ သေဆုံးသွားပြီး ခင်ပွန်းသည် သေဆုံးသွားပါက အခြားအမျိုးသမီးသည် ရှက်ရွံ့ခြင်းမရှိသဖြင့် ကလေးမွေးဖွားရန် လိုအပ်ပါသည်။]
ဂေမရဝါကျတွင် ခင်ပွန်းသည် ပထမသေဆုံးသည်ဖြစ်စေ၊ ဇနီးသည် (မြေး) အသက်ရှင်နေသေးသည်ဖြစ်စေ၊ နောက်မှ အခြားမယားသည် စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသော ဇနီးသည် သေဆုံးသည်ဖြစ်စေ၊ နောက်တော့ တခြားမိန်းမက ကလေးတစ်ယောက်ကို အကြွေးတင်တယ်။ [ဥပဒေသည် Bibom တွင် ပါ၀င်သည် သို့မဟုတ် Bibom တွင် တားမြစ်ထားသည့် အင်္ကျီနှင့် Bibum မဟုတ်ဘဲ] ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ခ Ahiezer တွင် အမှုကိစ္စ၊
[သေဆုံးသွားသော ယောက်ျားသည် မိမိသေဆုံးချိန်၌ ရှင်သန်နိုင်သော သုက်ပိုး သို့မဟုတ် သန္ဓေသားကို ချန်ထားခဲ့၍ မိမိ၏ဇနီးသည်၏ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။ သို့သော် သူ့တွင် ကလေးလုံးဝမရှိလျှင် သို့မဟုတ် မသေဆုံးမီ လူတိုင်းသေဆုံးလျှင် သူ့ဇနီးသည် ဘီဘွမ်ရှိရမည်။ သေပြီးနောက် မွေးဖွားသော သန္ဓေသားကို ထားရစ်ပြီး တစ်နာရီသာ အသက်ရှင်လျှင် သို့မဟုတ် သေနေသောသားကို ထားရစ်ခဲ့လျှင် ယင်းသည် အရာအားလုံးအတွက် အမျိုးအနွယ်ဖြစ်ပြီး ဇနီးသည်၏ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။]
အဟိဇာမြို့၌ ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရသော ဖခင်သည် ကွယ်လွန်သွားသော ဖခင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကွယ်လွန်ချိန်တွင် ဖခင်၏နောက်တစ်ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားသော အသားစားသတ္တဝါကို ထားရစ်ခဲ့ကာ၊ အသားစားသားသည် သေလုမျောပါးအရာအားလုံးအတွက် အမျိုးအနွယ်ဖြစ်သည်ဟု ယူဆသည်ဖြစ်စေ၊ အသေကောင်သည် စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်၊ အသားစားခြင်း (၁၂ လအတွင်း သေဆုံးနိုင်သည်)။ [Rose Garden သည် ဓားစာခံအဖြစ် လုံးဝအသက်မရှင်ဟု မယူဆဘဲ သေခြင်းထက် ပိုဆိုးသည် နှင့် သေဆုံးသွားသော အမျိုးသမီးသည် ဘီဘွမ်ဖြစ်ရမည် ဟု Rose Garden က ယူဆသည်။ Ben Tripa သည် Maybum မှ ထုတ်ပယ်ခံရကြောင်း ထပ်လောင်း သက်သေပြချက်
မိသားစုဝင်နှစ်ဦး (တူညီသောအကြောင်းပြချက်ကြောင့်) အချိန်တိုအတွင်း သေဆုံးရခြင်း၏ တူညီချက်များရှိသည်။
Nissan 13 - 04/2022/17 27:XNUMX တွင် ဆယ့်သုံးကြိမ်မြောက်
ဒါက ဒီနေ့ page ပါ 🙂
Nissan 13 - 04/2022/19 06:XNUMX တွင် ဆယ့်သုံးကြိမ်မြောက်
Nadav သည် CJ ၏အလယ်တွင် HG အတွက် Ahiezer ၏အဖြေကိုရည်ညွှန်းနေသည်ထင်သည်။
၁၉၃၇ ခုနှစ် အာဒါလ (ဂ) တွင် အီရတ်တွင် လူသတ်မှု ကျူးလွန်စဉ် ဖခင် သတ်ဖြတ်ခံရသော နေ့ရက်တွင် မည်သူ့ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်၊ ထို့နောက် လူသတ်သမားများက အဆုတ်ကို ဓားဖြင့် ထိုးသတ်ခဲ့သော တစ်နေ့တွင် အသက်ရှင်သော သားကို သတ်ဖြတ်ရန် ခွင့်ပြုပါက၊ Ginat Vardim responsa တွင်ကဲ့သို့ The Sephardi ကို Yosef နှင့် Harka'a နှင့် Petah Tikva တို့တွင် ဒူးထောက်၍ ထုတ်ယူခြင်းမရှိဘဲ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့သည်။
ဤနေရာတွင် Ginat Vardim responsa တွင်တွေ့ခဲ့ရပြီး ၎င်းအား သက်တမ်းတိုးရန် အထောက်အထားမတွေ့ရှိရပေ၊ Matanitin တွင်သေဆုံးကာ လမ်းညွှန်ပြသထားသည့် ဘာသာရေးတစ်ခုမှမဟုတ်ဘဲ Tani Prefa မှမဟုတ်ဘဲ Detrapa မှ အလုပ်ထုတ်ခြင်းမဟုတ်ဟု ဆိုလိုသည်။ သို့သော် Toss D မှ၊ Toss အတွက်၊ Dalarbanan Darbav Hoy မှ Sanhedrin တွင် သားကောင်အဖြစ် ရှင်းပြထားသော လူတစ်ဦးမှ သူသေသွားပုံရသည်၊ ထို့ကြောင့် လူသတ်သူ Dahurgo မှ PB ရှိ Maimonides သည် သားကောင်အဖြစ် မသတ်ဘဲ အခြား Demprashim GC မှ တိုင်းထွာပြီး သေလုဆဲဆဲဖြစ်သော ဒါဖ်။ ထို့အပြင် Demguide တည်ရှိရာ Hari Batos Yavmot ၏အိမ်များနှင့် B.H. A.H. နောက်ဆုံးတွင်၊ ၎င်းသည် သေလုမျောပါးကဲ့သို့ လူတစ်ဦး၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် သေဆုံးနေသော စံပြပုဂ္ဂိုလ် Toss ၏ နှုတ်ကပတ်တော်များမှ သက်သေပြခဲ့ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ကုရ်အာန်၏ စီးနင်းစီးနင်းမှုများတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် S. Judges တွင်ပါရှိသော ကုရ်အာန်ပါ သေလွန်သူများနှင့် လမ်းပြသူသည် ဘေဘီတစ်ထည် လိုအပ်ပြီး အိတ်ထဲမှ ထုတ်ပစ်ရသောကြောင့် သူမည်သည့်အရာကို ဂရုမစိုက်ပါနှင့်။ ယေဘူယျအားဖြင့် မြေးဖြစ်သူသည် ကယ်တင်ခြင်းခံရရန် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆပါက ဆုံးရှုံးသွားသော ညီအစ်ကို၏ ဇနီးသည်တွင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း ခံရမည်မှာ ထူးဆန်းသည်မှာ ထူးဆန်းပါသည်။ Shabbat KK တွင် Toss Reid သည် သံသယရှိသူ၏ သံသယများကြောင့် လုံးဝ မခံစားရဘဲ၊ ကယ်တင်ရန် မလိုအပ်ဘဲ လက်ထပ်ရန် ခွင့်ပြုထားသည်။ + Beit Yitzchak responsa၊ Chiv တွင် ရှုမ်။ G.C မှပြီးစီးခဲ့သော Beit Yitzchak တုံ့ပြန်မှုတွင် A.A.
ဒါပေမယ့် ဒါက ငါတို့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ ကုသမှုနည်းလမ်းနှင့် စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ အတိုင်းအတာများကို ရည်ညွှန်းခြင်း လုံးဝမရှိခြင်းတို့ဖြင့် သဘောကျနိုင်သော်လည်း၊
Nissan 13 - 04/2022/19 31:XNUMX တွင် ဆယ့်သုံးကြိမ်မြောက်
[ကုသနည်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သင့်သဘောထားမှတ်ချက်၏ အဆုံးတွင်၊ အဋ္ဌကထာပညာ၏ ရတနာလေ့လာရေးခရီးတွင် အဟိဇေဇာမှ မေးမြန်းသူမှာ ရဗ္ဗိဇုပေ့ခ်ျဖရန့်ဖြစ်ပြီး အခင်းဖြစ်ပွားသည့်နေရာ၌ လုံခြုံသောရဗ္ဗိ၏ ရဗ္ဗိ Pesach Frank က ၎င်းအကြောင်းကို မေးမြန်းခြင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။ shock စသည်တို့ကို ဖော်ပြခဲ့သည်။
ခဏလောက်တော့ သူ့သူငယ်ချင်း သိုးထီးပေါ်တင်ပြီး သတ်ခဲ့တဲ့ ဘုန်းကြီးရဲ့ နေ့စဥ် ဇာတ်လမ်းနဲ့ ဆင်တူတယ်လို့ တွေးမိပြီး သူ့အဖေက ဓားရဲ့ ပျော့ပျောင်းမှုကို ဆွေးနွေးဖို့ ဆောင်းပါးတွေ တရားဒေသနာတွေ ရေးထားတယ်၊ သို့သော် ရန်သူများကို သတ်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် လုံးဝ အလားတူမဟုတ်ပေ။
Nissan 13 - 04/2022/23 57:XNUMX တွင် ဆယ့်သုံးကြိမ်မြောက်
နိသန်လ ၅၇၆၄ (ရဗ္ဗိယောသပ် ကာရို၏ ၁၃) တွင်၊
၎င်းတို့၏ အဖြေများတွင် ၎င်းတို့၏ ဖော်မြူလာကို အခြေခံ၍ Halacha ၏ ခုံသမာဓိလူကြီးများ၏ ခံစားချက် သို့မဟုတ် ခံစားချက်မဟုတ်သည့် ခံစားချက်များ တစ်ခုလုံး၏ ဆွေးနွေးချက်သည် မသက်ဆိုင်ပါ။ ပညာရှိများသည် ပရိသတ်၏ ခံစားချက်ကို နှိုးဆွရန် ရည်ရွယ်သည့် ရပ်ရွာအတွင်း ၎င်းတို့၏ တရားပွဲများကို ဖိတ်ခေါ်သည့် အခမ်းအနားများတွင် ၎င်းတို့၏ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ဖော်ပြကြသည်။ halakhic အဖြေတွင် ဆွေးနွေးမှုသည် halakhic 'dry' ဖြစ်သည်။ သီးခြားအုပ်ချုပ်ပြီး သီးခြားတောင်းဆိုတယ်။
အစ္စရေးနိုင်ငံရှိ ပညာရှိများ၏ လက်ရာအချို့ကိုသာ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်မှာ သတိပြုသင့်သည်မှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် ပုံနှိပ်စရိတ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သိသာထင်ရှားသော ဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှိသော ရွေးချယ်မှုကို ပုံနှိပ်ထုတ်ရန် ကြိုးစားပါ။ ဟလာခါမှာ အသစ်အဆန်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဒဏ္ဍာရီထဲက အသစ်အဆန်းပဲဖြစ်ဖြစ်။ သတင်းကောင်းနှင့် ဝမ်းနည်းပူဆွေးခြင်းအတွက် ဝမ်းမြောက်ခြင်း ခံစားချက်ကို ဖော်ပြခြင်း - အသစ်အဆန်းမရှိ၊ လူတိုင်းခံစားရပြီး စာရွက်များထည့်စဉ်တွင် ၎င်းကို ကြာရှည်ထားရန် မလိုအပ်ပါ။ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေမှာတောင် အသေးအမွှားလေးတွေကို ရိုက်နှိပ်ထားတယ်။
Nissan 14 - 04/2022/00 06:XNUMX တွင် ဆယ့်သုံးကြိမ်မြောက်
စာပိုဒ် ၁၊ စာကြောင်း ၂
…သူတို့ရဲ့ စကားတွေကို အခြေခံပြီး…
ကြမ်းတမ်းစွာ အုပ်ချုပ်ခံရသည့်အခါ တစ်ခါတစ်ရံ နောင်တရခြင်းသည် ဝမ်းနည်းခြင်းစကားဖြင့် ကြာရှည်တတ်ကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။ ခုံသမာဓိလူကြီးသည် သူ၏ကြီးမားသောဆန္ဒရှိသော်လည်း မကယ်တင်နိုင်ဟု ခံစားလာရသောအခါတွင်၊ တခါတရံတွင် သူ၏စီရင်ချက်တွင် သူ၏ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုကိုလည်း ဖော်ပြလိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ Rabbi Chaim Kanievsky က သူ့ရာထူးကို စကားလုံးအနည်းငယ်ဖြင့် အတိုချုံး ညွှန်ကြားခဲ့သော်လည်း Rabbi Menachem Burstein က Rabbi Kanievsky က 'အိုး၊ အိုး၊ အိုး။ ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးပေါ့နော်။
အမှားတစ်ခုက Rosh Yeshiva ကို လိင်စိတ်ထကြွမှုမဖြစ်စေဘဲ PP ကိစ္စကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြမလဲလို့ မေးတဲ့အခါ အလားတူပါပဲ။ ကျောင်းသားများသည် အဖြစ်မှန်နှင့် မသက်ဆိုင်သော်လည်း ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သော ဟာလခစံနှုန်းများဖြင့် ဖြေကြားခဲ့သည်။
Mishnah တွင်ဖော်ပြချက်သည် "ထိုလုပ်ရပ်" မဟုတ်ပါ။
ထို့ထက်နည်းသောအချက်မှာ ပညာသင်ကြားနေသော ပညာရှင်များ ဦးဆောင်သော Shlomi Emuni Yisrael သည် မိသားစုများကို ကူညီရန် စည်းရုံးလျက်ရှိသည်။
ဤပြဿနာများသည် လွန်ကဲသောအခြေအနေများကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်အတွက် ကားများအတွက် "ပျက်ကျခြင်း" နှင့်တူပါသည်။ ကားတိုင်းက လမ်းမှာ ဒီလိုမျိုး ဖြတ်သွားမယ်ဆိုတာ မသေချာပါဘူး။
တစ် မင်းရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုက ငါ့ရဲ့မှတ်ချက်ထဲက ဟာသကို လုံးဝလွဲချော်သွားတယ် ( doc : telenovela ၊ ကျမ်းကိုးကျမ်းကပေးတဲ့ အံ့ဖွယ်ဇာတ်ညွှန်းသိုလှောင်ခန်းထဲမှာ၊ မင်းလည်း ထပ်ရေးနိုင်တယ်။)
ခ ငါရော မင်းရဲ့ပါရဂူကျောင်းသားတွေရော (ဂျာနယ်တွေမှာ သိပ္ပံဆောင်းပါးတွေ မရေးဖြစ်ဖူးတဲ့ သူတွေရော၊ Macrame နဲ့ အိမ်တွင်းစီးပွားရေးဌာနမှာ စာမသင်ကြဘူး။ ရုပ်ဝါဒနဲ့ လူမျိုးကြီးဝါဒကို ဘယ်သူပြောတာကို လက်မခံဘူး။) စံနှစ်ချက်ကို ကောင်းကောင်းနားလည်တယ်။ . ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အချို့သည် ၎င်းကိုပင် နှစ်သက်ကြသည်။ အမှန်စင်စစ်၊ ကျွန်ုပ်တို့အများစုမှာ ဤကဲ့သို့သော gemara ပြဿနာများကို ပထမဆုံးအကြိမ် ကြုံတွေ့ရပြီး ကျွမ်းကျင်ပြီး သာမန်လေ့လာသူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ အကြည့်အသစ်များ ("နိုင်ငံခြား") မှသာလျှင် အတိအကျ အကျိုးရှိနိုင်သည်ဟု ယူဆပါသည်။ ပုံမှန်ငေးကြည့်။ အသစ်သောအရာများကို ကြည့်ရှုနိုင်စွမ်းရှိခြင်းသည် လူတိုင်းအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ မကြောက်ပါနဲ့၊ ပိုကောင်းတဲ့ ပညာရှင်တွေနဲ့ တရားသူကြီး (လိင်မပြောင်းသူ) တွေ ထွက်လာပါပြီ။
တတိယ။ သို့ရာတွင် ဒိုင်ယာန်နှင့် တရားသူကြီးတို့သည် အမှန်တကယ် ရှိုက်ကြီးတငင် ရှိုက်ကြီးတငင် ရှိုက်ကြီးတငင်နှင့် လေ့လာနေချိန်တွင် တစ်ရှူးအစုအဝေးများကို ဖယ်ရှားပစ်ရမည့်အစား ၎င်းတို့၏ ဉာဏ်နှင့် အနုမာနနှင့် သင်ယူနိုင်စွမ်းတို့ကို လေ့ကျင့်ခြင်းမပြုသင့်ပေ။ ငါပြောနေတာ (ပြောနေတာ) နှစ်ထပ်နှင့်ကျန်းမာသောအသွင်အပြင်အကြောင်း။ ဟုတ်တယ်၊ မျက်တောင်ခတ်တာတောင် အလုပ်လုပ်တယ်။ မျက်ရည်တစ်စက်မျှသာ မဟုတ်ပါ။
ဃ။ တည်းခိုခန်းစောင့်အဖြစ် ယဇ်ပုရောဟိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးများ၏ စီရင်ချက်ချပုံသည် မည်သို့သောပုံသဏ္ဌာန်ရှိသနည်း၊ ၎င်းတို့၏ ရပ်တည်ချက်အရ တစ်ခါတစ်ရံ ဘေးအန္တရာယ် တစ်မျိုးမဟုတ် တစ်မျိုးနှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည့် အရေးကြီးသော ပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါ။ တရားရေးဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်သည် ၎င်း၏ ထက်မြက်မှုအားလုံးတွင် ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဆွေးနွေးမှု၏ ပြတ်သားမှုကို မထိခိုက်စေဘဲ၊ တန်ဖိုးနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားဘက်ဆိုင်ရာ ဆက်စပ်နေမည့် အတိုချုံး နိဒါန်း သို့မဟုတ် ပူးတွဲဖော်ပြချက်များ အမြဲရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခ။ သွေးမြစ်များနှင့် ပိုက်များ၏ မေးခွန်းသည် ဆိုးရွားရယ်မောစရာ နမူနာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာ၊ လေထုနှင့် ပညာရေးအတွက် ရှုတ်ချမှုနှင့် အရေးမပါမှုတို့အကြောင်း ဤနေရာတွင် အဆက်မပြတ် အခြေအတင် ငြင်းခုံမှုတစ်ခုအပေါ် သက်ရောက်ပါသည်။
တစ် တကယ်ကို မလွမ်းမိဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ ထပ်တူပွားခြင်း၏ ကြည်ညိုမှုနှင့် ပျော်ရွှင်မှုအကြောင်း ကျွန်တော်ရေးခဲ့ပြီး ဟာသကို ကောင်းစွာနားလည်ခဲ့သည်။ ဒါတောင် အဆိုးထဲက ဝေဖန်သံတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ ငါနားလည်တယ်၊ ငါမှန်တယ်။ ဒီနေရာမှာ မင်းရဲ့ မှတ်ချက်က ဒါကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြတယ်။ Gemara တစ်ခုလုံးတွင် Cheshin ဗားရှင်းတွင် ကဗျာဆန်သော နိဒါန်းမပါဝင်ပါ။
ခ ၎င်းသည် စင်စစ်အားဖြင့် အမြတ်အစွန်းရနိုင်သော မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း များသောအားဖြင့် halakhic အဆင့်တွင် အကျိုးအမြတ်မရှိပေ။ ကော်လံအဆုံးမှာ ဒါကို မှတ်ချက်ပေးခဲ့တယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို အာရုံစိုက်တယ်။
တတိယ။ အဲဒါကို နှစ်ထပ်မြင်ရပြီး အဲဒါကို ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ မေးခွန်းကတော့ တွေးခေါ်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်နဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး ဒုတိယလေယာဉ် မရှိတော့တာဟာ စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်သင့်သလား၊
ဃ။ တရားရုံးချုပ် တရားသူကြီးများသည် ခုံသမာဓိလူကြီးများ နှင့် မတူဘဲ ဟာလဟာဟ် မဟုတ်ဘဲ ဥပဒေနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ တရားဥပဒေ၌ ဟာလခဟ် (အမြဲတမ်းမှန်သည်မဟုတ်ပါ) ထက် အလေးချိန်ပိုရှိသည်။ ၎င်းအပြင်၊ Halachic တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးသည် လက်တွေ့ကျသောကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်ပြီး Gemara သည် မလုပ်ဆောင်ပါ။ ကျွန်တော့်စကားအရ ကျွန်တော် ဒီဌာနအတွက် ရပ်တည်ခဲ့တယ်။
ဘုရားသခ။ ဆိုးရွားတဲ့ဟာသကို ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ပြီး ဒါဟာ ငါဆက်ဆံနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ အတိအလင်းပြောခဲ့တယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရားဝေဖန်ရေးမှာ နေရာလွတ်ရှိမရှိ ၊
နောက်ဆုံးတွင်၊ အနှစ်သာရနှင့် မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒကို စွဲချက်တင်ခြင်းသည် ပုံမှန်နှင့် မသက်ဆိုင်ပါ (အများအားဖြင့် ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက်များ ကုန်သွားသောအခါတွင် ၎င်းကို ကောင်းစွာအသုံးပြုသည်)။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံကို အထင်ကြီးလေးစားမှုကို တင်ပြတဲ့အခါ အချက်အလက်တွေကို ပြောပြပါတယ်။ ရလဒ်သည် ခိုင်လုံပါက၊ အနှစ်သာရအားဖြင့် မှန်ပေမည်။ ယင်းကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းမှာ ရလဒ်များကို ငြင်းဆိုခြင်း သို့မဟုတ် အပြစ်တင်ခြင်းမဟုတ်သော်လည်း အဖြစ်မှန်မဟုတ်ကြောင်း ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ငြင်းခုံခြင်းသာဖြစ်သည်။ မင်းဒီလိုလုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုရင် မင်းရဲ့စကားတွေကို ငါသတိမထားမိဘူး။ အားနည်းသူများ၏ မကောင်းဆိုးဝါးများထဲမှ တစ်ခု (ဤအခြေအနေတွင် အမျိုးသမီးများသည် အားနည်းသော လူဦးရေဖြစ်သည်၊ အမြဲတမ်း အပြစ်တင်ရန် မလိုပါ။ ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်သည် "အားနည်းသွားသော" ဟူသော ရွံ့ရှာဖွယ် စကားစုကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း လက်ခံရန်ပင် ဆန္ဒရှိပါသည်)၊ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမည့်အစား အဖြစ်မှန်ဖော်ပြချက်ကို ကန့်ကွက်ရန်ဖြစ်သည်။ အဖြစ်မှန်။ ပထမနေရာမှာ အမျိုးသမီး ပညာသင်ဆုနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး ရေးခဲ့တာပါ၊ အဲဒါကို ဖတ်တဲ့ အမျိုးသမီး အများစုဟာ လိုအပ်တဲ့ ကောက်ချက်ဆွဲပြီး တိုးတက်အောင် ကြိုးစားနေမယ့် အစား စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပါတယ်။ အခြေ အနေကို ဂုဏ်ပြုဖို့ စမ်းသပ်မှု ဆေးစာတစ်ခု (အကယ်၍ ကောင်းသည်ဟု ထင်ပါက၊ အထိမ်းအမှတ်ပွဲ သည် သင့်မျက်လုံးထဲတွင် လုံးဝ မကောင်းပါ ၊ သို့သော် ကျွန်ုပ် စွပ်စွဲ ခံရသည်ကို ကျွန်ုပ် မမြင်ပါ)။
ကျွန်ုပ်၏ဝေဖန်ချက်သည် Gemara နှင့်မဟုတ်ဘဲ နှစ်ထပ်ကိုးကားရန် တောင်းဆိုမှုကို လှောင်ပြောင်သည့် ပညာရှင်-လစ်သူနီးယန်းချဉ်းကပ်မှုမှဖြစ်သည်။ တရားသူကြီးများထံမှ သာဓကသည် Cheshin ၏ လူသိများသော ပုံကြီးချဲ့ကဗျာသို့ သွားရန် မလိုအပ်ပါ၊ ၎င်းတွင် ပို၍ အောင်မြင်ပြီး လေးနက်သော ဥပမာများ ရှိသည်၊ သင်သိသည်နှင့်အမျှ ကျွန်ုပ်သည် အထက်တရားရုံးချုပ်မှ ဘွဲ့ရပြီးသည့်နောက် ယနေ့ကာလတွင် ချစ်လှစွာသော ဂျူးတစ်ဦး၏ သွန်သင်ချက်များနှင့် အလုပ်ရှုပ်နေပါသည်။ ရှုမှတ်ထိုက်သော နေရာ၊
အကြောင်းအရာထက် စတိုင်လ်နဲ့ ပတ်သက်တယ်လို့ မင်းကို ငါစွပ်စွဲခဲ့တယ်၊ အဲဒါက ဘယ်လောက် အံ့သြစရာကောင်းလဲ- ထပ်ပြီး ပြုံးပြလိုက်ပါ။ သူ့ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ဝင်တွေကို ထပ်ခါထပ်ခါ လှောင်ပြောင်ပြောဆိုဖို့ တောင်းဆိုတဲ့သူတိုင်းက သူ့အငြင်းပွားမှုက အောင်မြင်မှုနည်းတယ်လို့ အတိအကျ သံသယဖြစ်သင့်တယ်။ သို့မဟုတ် သင်၏သန့်ရှင်းမှုဘာသာစကားကို အဓိပ္ပါယ်ဖော်ရန်- "အထက်ပါ အပြုံးသည် ပုံမှန်နှင့် မသက်ဆိုင်ပါ (အဓိက အကြောင်းပြချက်များ ကုန်သွားသောအခါတွင် ၎င်းကို အများအားဖြင့် ကောင်းစွာအသုံးပြုသည်)။
လက်တွေ့မှာ ကျောင်းသားတော်တော်များများရဲ့ ဒီလိုတုန့်ပြန်မှုကို ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတာ နားလည်ပါတယ်၊ ဒါက ဒီလိုမျိုး သီအိုရီတွေကို မျှတစေပါတယ်၊ နှိမ့်ချတဲ့ပုံစံကို ကန့်ကွက်တာပါ (အထူးသဖြင့် ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အာရုံခံစားမှုတွေ အရမ်းဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ PhD ကျောင်းသားတွေနဲ့ မတူဘဲ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ အိမ်တွင်းစီးပွားရေး၊ သူတို့ရဲ့ ဂျာနယ်စနစ်အတွက် ပြွန်တစ်ခုကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်း) နောင်တပညာရပ်အတွက်”) ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ဖန်ပြန်လာခဲ့ကာ ဤတစ်ကြိမ်တွင် ကျွန်ုပ်၏မြင့်မြတ်သောဘာသာစကားကို ကိုးကား၍ “ဤတွင်ရှိနေသည့် အဆက်မပြတ်ငြင်းခုံခြင်းအတွက်၊ ဆက်စပ်မှု၊ လေထုနှင့် ပညာရေးအတွက် အရေးကြီးပါသည်။”
သို့သော် Gemara ကိုယ်တိုင်၌ ကိုးကားချက်နှစ်ချက် ပျောက်နေသည်။ ဤသည်မှာ လစ်သူယေးနီးယားတို့၏ တီထွင်မှုမဟုတ်ပါ။ လစ်သူယေးနီးယား ပညာရှင် သည် ထိုနေရာ၌သာ စွဲကပ်နေပြီး ၎င်း၏ အဆိုမှာ ကိုးကားချက် သည် လုံးဝတရားဝင်သော်လည်း ၎င်းသည် ပြဿနာကို လေ့လာရန် ကိစ္စမဟုတ်ကြောင်းနှင့် သီလ အကျင့်သီလ သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းချက် တစ်စုံတစ်ရာကို အတိအကျ မဖော်ပြပေ။
မင်းပြောနေတဲ့ပုံစံကို ငါနားမလည်ဘူး။ ဤနေရာတွင် ပြုံးရယ်ခြင်း မရှိပါ။ ဤသည်မှာ ကျား/မဌာန၏ လူမိုက်/အတတ်ပညာများ ၏ သာမာန် ငြင်းခုံမှုများဖြစ်သည်။ ဒါက အချိန်တိုင်းလိုလို လုပ်နေကြတာ။ ကျားမ မလေ့လာတဲ့ သူတွေတောင်မှ အမျိုးသမီးတိုင်း (ငါ့လို အများစု) က ဒီလို ငြင်းခုံမှုတွေက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ထုံးစံ အတိုင်းပဲ၊ ဒါတွေက ငါ့ အတွေ့အကြုံကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်တွေလို့ ထင်ပါတယ်။ ဤနေရာတွင် အငြင်းအခုံမရှိသော်လည်း လက်တွေ့ကျသော လေ့လာသုံးသပ်ချက်ဖြစ်သည်။
အင်္ဂါနေ့ Nissan 10 - 04/2022/15 47:XNUMX တွင်
အမှန်တော့၊ ကျွန်တော် Sarah ကိုရေးခဲ့သလိုပဲ၊ ဒီနေရာမှာ စာရိတ္တချို့ယွင်းချက်မရှိဘူး၊ ပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ Facebook မှာ Tractate Yavmot က ရုဗင်နဲ့ သူ့မုဒိမ်းမှုတို့ကို ထပ်ခါထပ်ခါ သယ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ Tractate Yavmot နဲ့ သူ့မုဒိမ်းမှုတို့ကို ထိန်းထားရကျိုးနပ်ဖို့ အကြံပြုထားတာကို ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်။ ရုဗင်နှင့် ရှိမုန်တို့ကို ဂုဏ်တင်ပြီး အရိတ္တနှင့် ဒဲဖုန်နှင့် ဟာမန်၏သားဆယ်ယောက်တို့ကို သာဓကများအစား ပေးသည်။ (အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Purim ကြောင့်ဟု ဆိုရသည့် အခြေအနေတစ်ခု ရှိနေပြီး ၎င်းကို လုံးဝ မဆိုလိုပါ) ကျား၊မ သင်ယူသူများကို ၎င်းတို့ အမှန်တကယ် မဆိုလိုသော်လည်း ၎င်းတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဆောင်းပါးများ ထုတ်ဝေရန်ဖြစ်ပြီး ယင်းသည် အသရေဖျက်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ၊ အဖြစ်မှန်လေ့လာရေး။
တစ် သူမ၏ တိရိစ္ဆာန်၏ ဟာသသည် အမှန်ပင် လွဲချော်သွားခဲ့သည်။ (ပထမအကြိမ်ဖတ်တုန်းကလည်း လွတ်သွားကြောင်း ဝန်ခံပါတယ်)
ခ Hyder တွင် ကလေးအား Gemara ၏ ဖော်မြူလာများတွင် ဖော်မြူလာပြုလုပ်သည်ဟူသောအချက်ကို ကူညီပေးသည်ဟု ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ သူ့ခုံတန်းစားက ဘယ်ကထွက်တာလဲ အတိအကျမေးရင် သူ ရှုပ်ပွပြီး နီရဲလာလိမ့်မယ်။
တတိယ။ ငါ့မိန်းမက မှန်ကို အတိအကျ မကွဲကွဲဘဲ လမ်းပေါ်မှာ ကြေမွနေတဲ့ ကြွက်တစ်ကောင်ကို တွေ့တယ် လို့ ပြောရင် ငါ မအီမသာ ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ငါပြောရင် အန်တယ်။ တစ်ချို့လူတွေက သူတို့ဖတ်ထားတဲ့ အဖြစ်မှန်ကို သူတို့ဘာသာဆွဲပြီး တစ်ချို့သောနည်းနဲ့ တွေ့ကြုံရပြီး တချို့က မယူကြဘူး။ Harry Potter ကိုဖတ်ပြီး ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး ပြောနိုင်တယ် - ကျွန်တော် တကယ်ကို အဲဒီလို စိတ်ကူးမယဉ်မိဘူး။ တခြားလူက ငါ့ကို စိတ်ကူးမယဉ်ဘူး။ Bar Ilan မှ အယူဝါဒ ပညာရှင် များသည် အကြည့် နှစ်ချက် ကို နားလည် သည် ဟု ယုံကြည် သော်လည်း ၎င်းတို့ အတွက် အခြေအနေ များကို စိတ်ကူး မယဉ် နိုင် ပါ။
ဃ။ သေချာတဲ့ သက်ရောက်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ လူတစ်ယောက်က သူလေ့လာနေတဲ့ အခြေအနေကို လက်တွေ့မှာ တွေ့ကြုံရရင် သူနဲ့ အဆက်ဖြတ်ဖို့ ပိုခက်ခဲလိမ့်မယ် လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ သူကြုံတွေ့နေရသည့် အခြေအနေကို ချက်ခြင်း ပုံဖော်ပေးလိမ့်မည်။ ဟိုက်ဒရာဘတ်ရှိ ကလေးတစ်ဦးသည် လမ်းမှားရောက်ခြင်းအကြောင်း လေ့လာရန် ပိုမိုလွယ်ကူသည့် အခြားအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ့ကမ္ဘာနဲ့တော့ သိပ်မဆိုင်ပါဘူး။
ဘုရားသခ။ သင်ယူသူအချို့တွင်ပါရှိသော၊ ဆန်းသစ်တီထွင်လိုသောဆန္ဒသည် ၎င်းတို့၏ကမ္ဘာမှ Talmudic ကမ္ဘာပေါ်သို့ ပရောဂျက်ပြုလုပ်လိုပြီး လက်ခံသူအဖြစ် လုံးဝမရောက်ဘဲ သင်ယူမှုကို စိတ်ခံစားမှုဖြစ်လာစေသည်မှာလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
နှင့် သံသယမရှိဘဲ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခြင်းသည် ပြဿနာများကို ရှင်းလင်းစွာနားလည်ရန် အထောက်အကူဖြစ်သည်။ စိတ်ခံစားချက်ကို နောက်ပိုင်းမှာ မချိတ်ဆက်ဘူးဆိုရင် တစ်ခုခု ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ အကျင့်စာရိတ္တဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်ကို နားလည်ဖို့ ချိတ်ဆက်ရမှာ သေချာတယ်၊ စိတ်ခံစားချက်က တစ်နေရာရာမှာ တစ်နေရာရှိတယ်။
(သွေးပြွန်ပြဿနာက ဘာလဲဆိုတာတော့ ကျွန်တော် နားမလည်ခဲ့ပါဘူး။ ပြွန်မှတစ်ဆင့် လူနာထံ သွေးမလွှဲရဘူးလား၊ ရပ်ကွက်များကြားတွင် ပိုးမွှားကင်းစင်သော သွေးကို ပြွန်ဖြင့် လွှဲပြောင်းရန် မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ သို့မဟုတ် သတ်ထားသော တိရစ္ဆာန်မှ သွေးကို မျိုးအောင်ရန်အတွက် ပြွန်တစ်ခုသို့ လွှဲပြောင်းပေးရုံသာ ဖြစ်ပါသည်။ မိလ္လာအတွက်လား?သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်သည် လူကိုသတ်သည့်နေရာမှ သွေးများကို မီးဖိုချောင်သို့ ပိုက်တစ်ခုဖြင့် ရွှေ့ရန်၊ သင်မည်ကဲ့သို့ တည်ဆောက်မည် စသည်ဖြင့် ကူညီပေးသင့်သည်၊ သို့သော် ယင်းမှာ အပြစ်ကင်းသော မေးခွန်းဖြစ်သည်။
တစ် သင် လွတ်သွားနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် ငါနဲ့မဟုတ်ဘူး။ သူ့နေရာနဲ့သူ ဝေဖန်သူတိုင်းဟာ ဟာသမေးခွန်းတွေပဲ ရပ်တည်ပါတယ်။
ခ အမှန်တော့၊ ဒယ်အိုးဆိုတာ R. Chaim ကို မေးတာနဲ့တူတယ်။
တတိယ။ ကောင်းပါတယ်။ သူတို့စိတ်ထဲမှာ အခြေအနေတွေကို ပုံဖော်သူတွေ၊ အဲဒါကြောင့် ထိတ်လန့်နေတဲ့သူတွေနဲ့ ကျွန်တော် ပြဿနာမရှိပါဘူး။ ဤတုန်လှုပ်ခြင်းသည် နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာသီလကို ညွှန်ပြသည်မဟုတ်သလို ၎င်း၏မရှိခြင်းသည် ချို့ယွင်းချက်ကိုလည်း ညွှန်ပြသည်ဟု မထင်ပါ။
ဃ။ c ကြည့်ပါ။ ၎င်းသည် လေ့လာမှုကိုယ်တိုင်က ချို့ယွင်းချက်အကြောင်း ကော်လံအဆုံးတွင် ကျွန်ုပ်တုံ့ဆိုင်းနေသော မှတ်ချက်နှင့် ဆက်စပ်နေနိုင်သည်။
ဘုရားသခ။ ကျန်းမာရေးအတွက်။ ဤနေရာတွင် တောင်းဆိုချက်တစ်ခုရှိပါသလား။ ငါသည် အမျိုးသမီးများ သို့မဟုတ် သင်ယူသူများ၏ ရောဂါလက္ခဏာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းမဟုတ်ဘဲ အနှစ်သာရအားဖြင့်သာ ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်။ ဘယ်ကလာတာလဲ မဟုတ်ဘူး၊ အရေးကြီးသလား၊ အရေးကြီးသလား။
နှင့် သူဘယ်မှာနေလဲ ရှင်းပြတယ်။
သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တစ်ယောက်အကြောင်း မေးခွန်းတစ်ခုနဲ့ ပြဿနာက ဘာလဲဆိုတာ ကျွန်တော် နားမလည်ခဲ့ဘူး။ အဲဒါနဲ့ ပြဿနာ မတွေ့ဘူး။
နောက်ဆုံးတွင် Gemara ကို သန်စွမ်းအတိုချုံးခြင်းအနုပညာဖြင့် ရေးသားထားသည်။ (ဒါက ကျွန်တော့်အတွက် အံ့ဩစရာတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ)။
လောက-ကမ္ဘာများကို စကားလုံးသုံးဝါကျဖြင့် ခေါက်ထားနိုင်သည်၊ စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်တွင် နှစ်ရာနှင့်ချီသော ကွာဟချက်ပါဝင်နိုင်သည်၊ အဓိပတိ၏ PSD နှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းသည် မည်မျှသက်ဆိုင်သနည်း။ Gemara ၏ တိုတိုနှင့် ပြတ်သားသောဝါကျတစ်ကြောင်းတွင် ပါရှိသည့်အရာသည် စာမျက်နှာရာနှင့်ချီမဟုတ်ပါက ဒါဇင်နှင့်ချီသောနေရာတွင် ပျံ့နှံ့သွားမည်ဖြစ်သည်။
မည်သည့်အမျိုးသမီးထက်မဆို ထိလွယ်ရှလွယ်နှင့် တရားသူကြီးချုပ်မရှိသော Talmudic စာမျက်နှာ၏ နောက်ဆုံးစကားလုံးများ၏ လက်မှုပညာသမားများကို ကျွန်ုပ်သံသယမရှိပါ။
ပြီးတော့ အဲဒါတွေအားလုံးက အတိတ်က စတင်ခဲ့တာ၊ ပြီးတော့ စာရေးနည်းမရှိတာ၊ မျိုးဆက်တွေကို ကူးယူထိန်းသိမ်းဖို့ လိုအပ်တာတွေကိုလည်း မှတ်သားထားရမယ်။
ဥပမာတစ်ခုပေးမလား။ Sugia Danan မှာ ဘာနဲ့ ဘယ်လိုထည့်မလဲ။
အင်္ဂါနေ့ Nissan 10 - 04/2022/15 39:XNUMX တွင်
သင်သဘောတူသည်၊ Gemara ကိုပြန်ရေးရန်ကျွန်ုပ်အတွက်မဖြစ်ပါ။ မျက်မှောက်ခေတ် စီရင်ချက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းသည် မျက်မှောက်ခေတ် စီရင်ထုံးများနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ရဗ္ဗိတစ်ပါးက သူ့တပည့်တွေကို သင်ပေးတဲ့နည်းနဲ့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ သူက သူသင်ပေးတဲ့ ရဗ္ဗိတစ်ယောက်ဆိုရင် ဒီပြဿနာကို သူ့တပည့်တွေကို သင်ပေးလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် ပုံဆောင်လက်ဟန်လေးတွေတော့ ရှိလိမ့်မယ်။ မျက်တောင်ခတ်၊ပြောသလိုမျိုးပေါ့။ နှင်းပြိုကျမှုကြောင့် သေဆုံးရသည့် ဇာတ်လမ်းသည် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ အရေးပါမှု လုံးဝမရှိခဲ့ပါ၊ ယနေ့ ယူကရိန်းတွင်ပင် ဖြစ်ပွားနိုင်သည့် ကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု၊ သင့်ပါးစပ်နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားစရာ မှတ်ချက်တစ်ခု ရှိသည်။ နောက်ပိုင်းရေးတဲ့စာရဲ့ အတိုချုံးမှတ်တမ်းမှာ မထိန်းသိမ်းထားတဲ့ အမူအရာအချို့ရှိကြောင်း အကြံပြုလိုပါသလား။ သိဖို့ နည်းလမ်းရှိမယ် မထင်ပါဘူး။ Shas ရဲ့တစ်နေရာရာမှာ တစ်ခုခုကို 'စိတ်ခံစားမှု' အနည်းငယ်ပိုရှိသလားဆိုတာကို ဒီနေရာမှာ ကျွမ်းကျင်သူကို စိန်ခေါ်ဖို့ ထိုက်တန်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ယနေ့စာမျက်နှာတွင် အကြိမ်များစွာတွေ့ရသည့် နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော စကားစုတစ်ခုရှိသည် - ကျွန်ုပ်တို့သည် လူဆိုးများနှင့် ဆက်ဆံနေပါသလား။ ဤသည်မှာ လုံးဝအရေးပါသော စကားတစ်ခွန်းဖြစ်သည်၊ သို့သော် ၎င်းတွင် ဖော်ရွေသော ရှုပ်ထွေးမှုရှိသော တေးသံပါရှိသည်။
Torah အချိန်နှင့်ဆုတောင်းချိန် (စာရာနှင့်သူမ၏တိရစ္ဆာန်များအတွက်)
အင်္ဂါနေ့ Nissan 10 - 04/2022/16 03:XNUMX တွင်
သူမနှင့် Sarah - မင်္ဂလာပါ
ဟလာခ ပါသော တန်နာနှင့် အာမိုရိမ်တို့သည် ဒဏ္ဍာရီနှင့် ဆုတောင်းစာရေးဆရာများလည်း ရှိသည်။ Halacha တွင် ၎င်းတို့၏စကားလုံးများ - အမှန်အတိုင်း စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတစ်ခုကို ပုံဖော်ရန် သေချာပါစေ။ ၎င်းတို့၏စိတ်ခံစားမှုကမ္ဘာ - ဒဏ္ဍာရီများနှင့်သူတို့တည်ထောင်ခဲ့သောဆုတောင်းချက်များတွင်သူတို့၏စကားလုံးများကိုဖော်ပြနေစဉ် (Tannaim နှင့် Amoraim 'Batar Tzlotya' ဟူသောလှပသောကိုယ်ပိုင်ဆုတောင်းချက်များသည် Tractate Brachot တွင်အတူတကွစုရုံးကြပြီးအများစုမှာ 'Siddur' တွင်ပါဝင်သည်) . တိုရာအချိန်နှင့် ဆုတောင်းချိန် သီးခြားစီ။
လေးစားစွာဖြင့် Hillel Feiner-Gloskinus
ယနေ့ခေတ် Torah ပညာရှင်များ၏ သဘောထားနှင့် လေ့လာမှုအား စိတ်ခံစားမှုနှင့် ပေါင်းစပ်လိုသည့် သဘောထားမျိုး မဟုတ်ဘဲ 'သမီးတော် Torah ကို သွန်သင်ပေးသူသည် ဆုတောင်းခြင်းများကို သင်ကြားပေးသည် 🙂
'ပြီးရင် သင့်နှလုံးသားဆီ ပြန်သွားပါ' - သင့်စိတ်နှလုံးထဲရှိ လေ့လာမှု၏ အကြောင်းအရာကို အတွင်းပိုင်းထည့်သွင်းပါ။
Nissan 12 - 04/2022/16 51:XNUMX တွင် ဆယ်ခုမြောက်
လေ့လာမှုက 'နှလုံးသားအပေါ် အုပ်ချုပ်တဲ့ ဦးနှောက်' ဖြစ်ရမယ်။ Torah လေ့လာမှုသည် နှလုံးသား၏ယိုင်လဲမှုနှင့် အမြဲမကိုက်ညီသော Torah ၏စကားကို နားထောင်ရန်လိုအပ်သည် - အမှန်တော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းချက်ပြီးနောက် - ကျွန်ုပ်တို့သည် လေ့လာသင်ယူသူများနှင့် ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားပြုလုပ်လိုသောဆန္ဒဖြင့် အရာများကို စိတ်နှလုံးသို့လွှဲပြောင်းပေးရမည်ဖြစ်သည်။
Rebbetzin Or Makhlouf (Ramit in Midreshet Migdal-Anaz) ၏ ဆောင်းပါးကို "ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က သားရဲတွေမို့လို့" Migdal Iz Tisha: 31၊ p.0မှ စ၍ ကြည့်ပါ။ ထိုနေရာ၌ သူမသည် ဥာဏ်ပညာကြိုးပမ်းမှုနယ်ပယ်တွင် အောင်မြင်ခဲ့သော ဂရစ်ဆိုလိုဗေးနစ်ခ်ဖ်၏ နာကျင်မှုဝေဒနာကို ကိုးကား၍ ... ထင်မြင်ချက်များနှင့် စီရင်ထုံးများဆိုင်ရာ အသိပညာများ ရရှိခဲ့သည်။ သူသည် လှပသောသင်ခန်းစာများကို နှစ်သက်ပြီး ရှုပ်ထွေးသောပြဿနာကို စူးစမ်းလေ့လာသည်။ ဒါပေမယ့် ဒီလုပ်ဆောင်ချက်မှာ နှလုံးသားက မပါဝင်သေးပါဘူး… Halacha ဟာ သူ့အတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက်တွေ့ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Shechinah နှင့် အမှန်တကယ် သိကျွမ်းသူ ပျောက်ဆုံးနေသည်... '209 Words of View, p. XNUMX)။ အရှည်ဆောင်းပါးကို ကိုးကားပါ။
Torah သည် ၎င်းမတိုင်မီနှင့် အပြီးတွင် နှလုံးသားကို တက်ကြွစေရန်လိုအပ်ကြောင်း သိရှိပါစေ။ ၎င်းမတိုင်မီ - ကျွန်ုပ်တို့သည် အမှန်တရားကို ညွှန်ပြရန် အခွင့်အရေးရရှိရန် Torah ၌ သူ၏ဉာဏ်ပညာနှင့် ဆန္ဒအားဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့် ချိတ်ဆက်လိုသောဆန္ဒ၊ ကျွန်ုပ်တို့ သင်ယူခဲ့သည့် တန်ဖိုးများကို ဘဝတွင် ကျင့်သုံးခွင့်ရရှိစေမည့် ဆုတောင်းမှုတစ်ခုဖြင့် လိုက်လျှောက်ပါ။
Nissan 12 - 04/2022/16 56:XNUMX တွင် ဆယ်ခုမြောက်
စာပိုဒ် ၃၊ စာကြောင်း ၃
သင်ယူသူနှင့်အတူ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သက်သေခံခြင်း...
'သူ့ပေါင်ကြားက ဓားတစ်ချောင်းနဲ့ သူ့အောက်က ပွင့်နေတဲ့ငရဲ' ဟာ စဉ်းစားပြီး တည်ငြိမ်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု လိုအပ်တယ်
SD XNUMX တွင် Nissan P.B.
ခုံသမာဓိလူကြီးတစ်ဦးသည် ၎င်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် နှစ်ဖက်စိတ်ခံစားမှုများ ပြင်းထန်စွာ တွန်းလှန်ရမည်ဖြစ်သည်။ ယောက်ျား၏မယားကို စွန့်လျှင် တဖက်၌ အမင်္ဂလာရှိ၏၊ မယားကို စွန့်လျှင် စိတ်ဝိညာဉ်၌ အမင်္ဂလာရှိ၏၊ ချောက်ကြီး၏အစွန်း၌ ကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းကို နင်းသောသူသည် ညာဘက်သို့ အနည်းငယ်လွဲသွားသော တွင်းနက်ကြီးသို့ ဆုတ်ယုတ်သွားစေနိုင်သော နိယာမစကားပုံဖြစ်သည်။
ထိုအခါ ခုံသမာဓိသည် စိုးရိမ်စိတ်နှစ်ခွဖြစ်ရမည်၊ ဥပေက္ခာပြုခြင်းသည် လျစ်လျူရှုခြင်းမရှိဘဲ မမှန်သော စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသို့ ဦးတည်စေ၍၊ ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သော ခုံသမာဓိသည် ပျက်ကွက်ခြင်းမပြုဘဲ တားမြစ်ခြင်းကို မပြုရန် ဂရုတစိုက်ရှိရမည်၊ ခွင့်ပြုသည်။ တရားမျှတမှုကို ထုတ်ဝေမည်ဟူသော သူ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် စိုးရိမ်မှုသည် အတိအကျအမှန်တရားကို သူ၏မပျင်းမရိလိုက်စားခြင်းအတွက် အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
သို့သော် ဟာလခဟ်ကို ရှင်းလင်းပြောဆိုခြင်းမှ တားဆီးခံရသော စိတ်ခံစားမှုများ ကမောက်ကမဖြစ်ရခြင်းမှာ စိတ်ပူပန်မှုနှင့် စိတ်ပျောက်ဆုံးမှုတို့ကြောင့် ရှင်းလင်းချက်သည် အမှန်တရားကို မလွှမ်းမိုးနိုင်သောကြောင့် ရှင်းလင်းချက်ကိုယ်တိုင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ငြိမ်သက်စွာ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ခုံသမာဓိလူကြီးသည် စုံစမ်းရေးကာလတွင် ငြိမ်သက်နေပြီး အနာကျင်ဆုံးဖြစ်သည့်တိုင် ရွေးချယ်စရာအားလုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ပြင်ဆင်ထားရမည်။ ထို့ကြောင့် မေးစရာရှိလာသောအခါ- ခုံသမာဓိလူကြီးသည် စိတ်ခံစားချက်မုန်တိုင်းကို ဘေးဖယ်ထားပြီး အေးအေးဆေးဆေး စဉ်းစားရမည်။
ဟာလခမြို့သူသည် ချက်ခြင်းမတုံ့ပြန်နိုင်သော သူရဲနှင့်တူသည်။ သူသည် ခဏရပ်ပြီး ကာဗာယူကာ ပစ်မည့်နေရာကို စောင့်ကြည့်ကာ အကွာအဝေးနှင့် ပစ်မှတ်ကို တိကျစွာ ပစ်ရမည်။ ရန်သူကို ထိမိသော အမှားသည် ရန်သူအား ခိုလှုံရာနေရာကို သစ္စာဖောက်သောကြောင့် သေနတ်သမားအတွက် အန္တရာယ်ရှိသည်။
အခြေအနေကို အလျင်အမြန်ဖတ်ပြီး ဦးစားပေးသတ်မှတ်ရမည့် ကယ်ဆယ်ရေးသမား၏ အခြေအနေမှာလည်း အလားတူပင်။ အန္တရာယ်ရှိသောအရာကို ချက်ခြင်းဖြေရှင်းပါ၊ အရေးတကြီးဖြေရှင်းရန်၊ အရေးတကြီးနည်းသော နောက်ဆုံးအဆင့်သို့ ထွက်ခွာပါ။ ကြီးကြပ်မှုအခြေအနေ အကဲဖြတ်ခြင်း - သင့်လျော်သော ကုသမှုအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။
တိုက်ပွဲတွင် အနိုင်ရလိုသော သို့မဟုတ် အသေအပျောက်များကို ကယ်တင်လိုသော ပြင်းပြသောဆန္ဒသည် - တိုက်ခိုက်ရေးယူနစ် သို့မဟုတ် ကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ရန် တိုက်လေယာဉ် သို့မဟုတ် ကိုင်တွယ်သူကို လှုံ့ဆော်ပေးသော လောင်စာဖြစ်ပြီး 'ချွတ်ယွင်းချက်' အခြေအနေတွင် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချရပါမည်။ တွက်ချက်ပြီး တည်ငြိမ်စွာ စီရင်ဆုံးဖြတ်ပါ။
မမျှော်လင့်ထားတဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုကို ကြုံလာရတဲ့အခါ အေးအေးဆေးဆေး တွေးကြည့်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ၊ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် 'သီအိုရီ' တစ်ခုလုံးကို မေ့သွားတာမျိုးပါ။ ဤအချက်အတွက်၊ halakhic ဥပဒေပညာရှင်များ၊ တိုက်ခိုက်ရေးသမားများနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးသမားများသည် ဖြစ်နိုင်သမျှ 'blatam' တိုင်းကို ကြိုတင်မျှော်မှန်းနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းသည့် 'လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း' ကို ကိုင်ဆောင်ထားပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အခြေအနေအတွက် ကြိုတင်လုပ်ဆောင်မှုပုံစံများကို ရေးဆွဲထားကာ လက်တွေ့သမားများက အခြေအနေတိုင်းတွင် တုံ့ပြန်ခြင်းမပြုပါ။ ထို့နောက် 'ချွတ်ယွင်းချက်' ရောက်ရှိလာသောအခါ - လုပ်ဆောင်ချက်အစီအစဉ်သည် ချက်ချင်းပေါ်လာပြီး အတင်းပြန်ပြောစရာမလိုဘဲ စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အစီအစဥ်တွေကို ကြိုတင်စဉ်းစားပြီး အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တယ်။
Tractate Yavmot ၏အရေးကိစ္စများ။ မြေငလျင်လှုပ်ခြင်းနှင့် အိမ်ပြိုကျခြင်း၊ ရောဂါများနှင့် ကပ်ရောဂါများ၊ ကုန်သွယ်မှုနှင့် သင်္ဘောနစ်မြုပ်ခြင်း ပင်လယ်ပြင်တွင် လူများပျောက်ဆုံးခြင်း၊ စစ်ပွဲများနှင့် စာရင်းများနှင့် မြေကွက်များ - အထူးသဖြင့် ရောမပုန်ကန်မှုကာလတွင် ပညာရှိများနေထိုင်ခဲ့သည့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လုံးဝဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အခြေအနေများဖြစ်သည်။ Holocaust နှင့် Bar-Kochba ပုန်ကန်မှု။
ကပ်ဘေး စိတ်ဖိစီးမှုများသော အခြေအနေများကို ထိရောက်စွာ ကုသရန်အတွက် လမ်းညွှန်စာအုပ်သည် ဆီလျော်ပြီး ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အခြေအနေများ၏ ရှေ့ပြေးပုံစံများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့် တိုတိုတုတ်တုတ် ခြုံငုံကာ ၎င်းတို့အား ကုသရေးအစီအစဥ်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် Yavmot မျက်နှာဖုံးကို တိုတိုနှင့် ခြောက်သွေ့သောနည်းဖြင့် ပုံဖော်ထားသည်။ တိုက်ခိုက်ရေးသီအိုရီ သို့မဟုတ် ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း စာအုပ်ကို ရေးဆွဲမည်ဖြစ်သည်။
လေးစားစွာဖြင့် Hillel Feiner Gloskinus
Mishnah နှင့် Talmud တွင်၊ 'ကြေးနန်း' စကားလုံးများသည် ၎င်းတို့ကို ပါးစပ်ဖြင့်ဖော်ပြရန် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းတို့ကို အလွတ်ကျက်နိုင်စေရန်အတွက် ၎င်းတို့ကို ပေါ့ပါးပြီး စုပ်ယူနိုင်သော နည်းလမ်းဖြင့် ပုံဖော်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကြာရှည်စွာ နက်ရှိုင်းစွာ ပြောဆိုခြင်း သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပေါက်ကွဲသံများသည် အာဂုံဆောင်ခြင်းအတွက် အကျိုးမရှိပါ။ Talmud သည် အတွင်းကျကျလေ့လာရန်ဖြစ်ပြီး ဆုတောင်းခြင်းသည် ဝိညာဉ်သွန်းလောင်းရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ 'အခွဲ' သည် တိုတိုတုတ်တုတ် ဖြစ်ရမည်။
'Willen သည် ထိုညတွင် Jacob ဟုခေါ်သည်' - ငြိမ်သက်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည့် စိတ်ခံစားမှုမုန်တိုင်းတစ်ခု
ထို့ကြောင့် စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့် ဆုတောင်းနေသော Yaakov Avinu က 'ငါ့ကို ကယ်ပါ မောင်လေး၊ သားတို့ အတွက် အမေကို ပြင်ဆင်မှာစိုးလို့ ချက်ခြင်း ကယ်ပေးပါ' လို့ အေးအေးဆေးဆေးပဲ ဆက်ပြီး ဆုတောင်းတယ်။ သူ ချက်ချင်း ပြေးတော့မလို့။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ သူနှင့်သူ၏တပ်သည် အိပ်ပျော်သွားသည် (ဤကြောက်စရာကောင်းသောအခြေအနေတွင် မည်သူအိပ်နိုင်မည်နည်း။) နှင့် ဧသော၏စစ်တပ်ကိုတွေ့ရန် တိုက်ထုတ်နိုင်စေရန် လန်းဆန်းတက်ကြွစေပါသည်။\_\_
ဒါဝိဒ်သည် ကွဲသွားသောအခါ၊ သားတော်အဗရှလုံထံမှ ပြေး၍ တဘက်၌ထသော သူအများတို့လက်မှ ကယ်တင်ခြင်းအလို့ငှာ ဆုတောင်းပဌနာပြု၍၊ သစ္စာစောင့်သော လက်တဆုပ်စာလူအပေါင်းတို့ကို ဆီးတားလေ၏။ သူသည် ဆုတောင်းခြင်းတွင် သူ၏စိုးရိမ်မှုအားလုံးကို ဖော်ပြပြီး သူ၏ဆုတောင်းချက်သည် အမှန်အတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန် စီရင်ဆုံးဖြတ်ရန် ခွန်အားပေးသည်။ အဟိသောဖေလ၏ အကြံဉာဏ်ကို ဖောက်ဖျက်ရန် ရှေးဟောင်းအာရုံများကို ပေးပို့ခြင်းဖြင့် ဆုတောင်းပဌနာပြု၍ ဆုတောင်းပဌနာပြုပြီးနောက် ၎င်းကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးကာ ဆိုးရွားလှသော အခြေအနေကို ထိန်းထားနိုင်ကာ 'ငါသည် အတူတကွ ငြိမ်းချမ်းစွာ အိပ်စက်ခြင်းငှာ၊ အကြောင်းမူကား၊ သင်သည် ဧကန်မုချ၊
ပူပင်သောကသည် ဆုတောင်းခြင်းတွင် ထုတ်ဖော်ပြသသည်ကို တွေ့ရှိပြီး ယင်းမှလူသည် သမ္မာသတိရှိရှိ လုပ်ဆောင်ရန် ယုံကြည်မှုရှိရှိ ပြုစုပျိုးထောင်ထားသည်။
အင်္ဂါနေ့ Nissan 10 - 04/2022/16 59:XNUMX တွင်
Halakhah အတွင်း၌ပင် စိတ်ခံစားမှု အများအပြားကို သိမ်းဆည်းထားသည်။ ဒဏ္ဍာရီနဲ့ ဟာလဟာ ပေါင်းစပ်မှုက ဒါကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ခွင့်ပြုတယ်၊
ဥပမာအားဖြင့်၊ (သူမ၏ဘဝ) သည် နှလုံးသားကို ထိမိသော ကျွန်ုပ်၏အရသာ၊ (ဒီလောက်ထိ ဖိတ်စင်အောင် လွှတ်ထားပေးတဲ့ တရားရုံးချုပ်မှာ တရားသူကြီးရှိလားလို့ တွေးမိပါတယ်)
အင်္ဂါနေ့ Nissan 10 - 04/2022/17 14:XNUMX တွင်
သေချာတယ်။ သူတို့က အဲဒါကိုကိုးကားတယ်။
အင်္ဂါနေ့ Nissan 10 - 04/2022/17 45:XNUMX တွင်
အကိုးအကား ဟုတ်သည်၊ သို့သော် ၎င်းတို့သည် ယင်းကဲ့သို့ တောင်းဆိုမှုကို စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်မည် မသေချာပါ။
စကားမစပ်၊ စီရင်ထုံးများ မည်မျှကြာရှည်လာသည်နှင့် ငြီးငွေ့လာသည်၊ နှစ်များကြာလာသည်နှင့်အမျှ လက်သည် ကီးဘုတ်ပေါ်မှ ပေါ့ပါးလာပြီး သတင်းရင်းမြစ်အားလုံးကို ရရှိလာကာ သတင်းထောက်အား သတ်ခိုင်းရန် မလိုအပ်တော့သည်ကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။
စိတ်အားထက်သန်နေသော်လည်း 'အိပ်မပျော်ကြောင်း သွန်သင်သည်။
Nissan 13 - 04/2022/00 04:XNUMX တွင် ဆယ်ခုမြောက်
Nissan PB တွင် BSD XNUMX
ကျင့်စဉ် ဣန္ဒြေစောင့်ထိန်းခြင်း၏ အရေးပါပုံကို Hasidim က ပညာရှိ၏ ဆောင်းပါးတွင် 'ဟုတ်ပါတယ်၊ အာရုန်က သူအိပ်မပျော်ကြောင်း သင်ပေးတယ်' ၊ သန့်ရှင်းသော အာရွန် Gd က သန့်ရှင်းသော အာရုန် Gd အိပ်ပျော်နေတဲ့ 'Salka Da'ata' ဆိုတာ ဘာလဲ နားမလည်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ပညတ်တော်များ? အာရုန်သည် မီးခွက်ကိုသွားထွန်းသောအခါ စိတ်အားထက်သန်မှုအပြည့်ရှိသော်လည်း စိတ်အားထက်သန်မှုကြောင့် အသေးစိတ်အချက်များ လွဲမှားသွားမည်ကို ခံစားရရန် နောက်လိုက်များက ရှင်းပြခဲ့သည်။ ကြိုးပေးခံထားရသော်လည်း KML သည် ၎င်း၏တာဝန်များကို တိကျစွာထမ်းဆောင်ရန် ဂရုပြုပါသည်။
အင်္ဂါနေ့ Nissan 10 - 04/2022/17 22:XNUMX တွင်
IDF တွင် သင်ဖွင့်ထားသော စာတမ်းတွင် (ကျွန်တော်လည်း လက်မခံပါ) နှင့် ပတ်သက်၍ ဆူရာ၏လူများသည် မထင်မှတ်ထားသော ကိစ္စတစ်ခုတွင် ဤတောင်းဆိုချက်၏ လွန်ကဲသော သရုပ်ဖော်ပုံ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ https://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?cat_id=24&topic_id=2827720&forum_id=1364
အင်္ဂါနေ့ Nissan 10 - 04/2022/19 06:XNUMX တွင်
အမှန်တော့၊ Rami Bar နှင့်အတူ ထိုနေရာ၌ အကြောင်းအရာများ ရွတ်ဆိုခြင်းသည် ကြေကွဲစရာ နှင့် ဟာသများကို တစ်နေရာတည်းတွင် ရှိနေသည်။ စင်စစ်သော်ကား၊ အမှုပြီးသည်မှ စ၍ ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရန် တောင်းလျှောက်ကြကုန်၏။ သူသည် အခြားသူများ၏ စားပွဲကို အားကိုးချင်ပုံမရ
အင်္ဂါနေ့ Nissan 10 - 04/2022/22 20:XNUMX တွင်
Dayanim ရှေ့မှာ ပါတီနှစ်ရပ်က အချေအတင်ငြင်းခုံကြပြီး ရှုဒါဒါယင်းလို့ခေါ်တဲ့ ရှုဒါဒါယင်းလို့ခေါ်တဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုံးဖြတ်ချက်မချတဲ့အခါ Gemara အရ "အုပ်ချုပ်တဲ့ခံစားချက်" အတွက် နေရာရှိပါတယ်။
အင်္ဂါနေ့ Nissan 11 - 04/2022/00 07:XNUMX တွင်
Shuda Dadaini သည် အလွန်တိကျသော ကိစ္စများတွင် စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်မရှိသော အခြေအနေတိုင်းတွင် မဟုတ်ပါ။ ဒီအတွက် လုံလောက်တဲ့ ဥပဒေတွေရှိတယ်။ သို့သော် Shuda သည် စိတ်ခံစားမှုမဟုတ်သော်လည်း ထိုးထွင်းသိမြင်မှုတစ်ခုပင်။ မလုပ်ပါနဲ့ ။
အင်္ဂါနေ့ Nissan 10 - 04/2022/23 16:XNUMX တွင်
ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ ဒါဟာ အမှန်ပါပဲ- တစ်စုံတစ်ယောက်က "မနက်ဖြန်မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာဟာ စစ်မှန်ကြောင်း သိလိုက်ရရင် မင်းရဲ့လူနေမှုပုံစံကို လိုက်လျောညီထွေ ပြောင်းလဲမှာလား" ဆိုတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ယောက်ယောက်က အွန်လိုင်းမှာ စတင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ အချို့သော ရိုင်းစိုင်းသော အဖြေများသည် "မဖြစ်နိုင်သောကြောင့် မေးရန် အကြောင်းမရှိပါ"။ လူတွေဟာ တွေးခေါ်မှုဆိုင်ရာ မေးခွန်းရဲ့ အပိုင်းကို နားလည်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ လူငါးယောက်ကို အတင်းအဓမ္မ ပြေးမရအောင် ရထားသံလမ်းပေါ် အဆီအလွန်အမင်းရှိတဲ့လူကို ဘယ်တော့မှ ပစ်ချရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သူတို့ကို ရှင်းပြဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒါက အကျင့်စာရိတ္တဆိုင်ရာ ဒဿနိကဗေဒ သင်တန်းတွေမှာ အခြေခံမေးခွန်းတစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အလုပ်မဖြစ်ဘူး…
ပြီးတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်က နိယာမအားဖြင့် ယူဆချက်မေးခွန်းတွေက ကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့် ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာကောင်းတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေ ရှိတယ် ဆိုတော့ အဲဒါတွေကို တွေးခေါ်ပြီး ဆွေးနွေးတာက မှားတယ် (ပြောတာနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပြောရရင် ရထားပေါ်မှာ အရမ်းဆူနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို နင်းမိတာ၊ လုံးဝ အံ့သြစရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး)။ စာရေးသူသည် Yeshiva အထက်တန်းကျောင်းမှ R.M. ဖြစ်ပြီး ဤနေရာတွင် သင်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း ကိစ္စရပ်များတွင် သူဘာလုပ်နေသည်ကို ကျွန်ုပ်အတွက် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရပေ... မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ခေတ္တမျှ အချေအတင်ဖြစ်ပြီးနောက်တွင် သူက ကျွန်တော့်ကို မေးရန်တရားဝင်ဟု ထင်သလားဟု မေးခဲ့သည်။ မနက်ဖြန် မင်းအမေသတ်တာ မင်းသိရင် မင်းဘာလုပ်မလဲ" ဒီမေးခွန်းက ဘာပြဿနာလဲ ဆိုတာတော့ ကျွန်တော် နားမလည်ခဲ့ပါဘူး၊ ဒီမေးခွန်းရဲ့ ပြဿနာက ဘာလဲဆိုတာ နားမလည်တဲ့ အမေ့ကိုတောင် သွားပြောခဲ့တယ်... သူတကယ် မေးတဲ့ မေးခွန်းက ဘာပါလဲလို့ ငြင်းခုံနေချိန်မှာတော့ ကျွန်တော် မဖြေခဲ့ပါဘူး။ သူရှင်းပြဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အချက်ကို တော်တော်လေး နားလည်ပါတယ်။
အောက်ခြေလိုင်း - အကြောင်းအရာကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ခက်ခဲသောအခါတွင် လူများသည် အနားသတ်များဆီသို့ ပြေးသွားကာ အလှကုန် 'ပြဿနာများ' ကို အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအနေဖြင့် ညွှန်ပြရန် ကြိုးစားသော်လည်း အစပိုင်းတွင် ဤအကြောင်းအရာတွင် အဘယ်ကြောင့် မသင့်လျော်ပါသနည်း (ထို့နောက်၊ အလွန် ဆန်းကြယ်သော ဇာတ်လမ်းတစ်ခုသာ လေ့လာရန် ကျန်တော့သည်)။
အင်္ဂါနေ့ Nissan 11 - 04/2022/00 11:XNUMX တွင်
တကယ်ပါပဲ။ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို အောက်ပါနည်းလမ်းဖြင့် သူပြောပိုင်ခွင့်ရှိနေသည်ဟု ကျွန်ုပ်မှတ်ချက်ချပါသည်- ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် အဓိပ္ပာယ်ရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သိသော ခရစ်ယာန်ဘာသာမဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားသည် မှန်ကန်ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိပါက ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်မည်နည်းဟု မေးခွန်းထုတ်စရာ နေရာမရှိပါ။ အလားတူပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်တွင် မည်သည့်အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ Maimonides က မည်သို့ပြောမည်ဆိုသည်ကို မေးခွန်းအတွက် နေရာမရှိပါ။ အကယ်၍ သူသာ ယနေ့ အသက်ရှင်နေပါက သူသည် Maimonides ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
အင်္ဂါနေ့ Nissan 10 - 04/2022/23 29:XNUMX တွင်
မင်္ဂလာပါ အရှင်ဘုရား Michi။
သင်၏ပြောဆိုချက်ကို ငြင်းခုံရန် ခက်ခဲသည်၊ အမှန်စင်စစ် "သာမာန်သဘော" တွင် အသန့်ရှင်းဆုံးနှင့် အမှန်ကန်ဆုံးမှာ net halakhic ဆင်ခြင်တုံတရား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပါသည်။ သို့သော် ပညာရှင် Shas ပြဿနာများကို လူသားတစ်ဦး သို့မဟုတ် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ဦးတည်ချက်များကို ဖတ်ရှုပေးသည့် ဇာတ်လမ်းများတွင် အကြိမ်များစွာ ထုပ်ပိုးထားရသည့်အချက်ကို လျစ်လျူရှုရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။
ဥပမာ ၂ ခုကို ငါပြောပြမယ် (ပထမတစ်ခုက နည်းနည်းတော့ အားနည်းတယ်) Tractate Gittin က အမျိုးမျိုးသော စိတ်ကူးနဲ့ လက်တွေ့ဆန်တဲ့ ပြဿနာတွေရဲ့ အသေးစိတ်ကို ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်မှာ အမုန်းတရားနဲ့ ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းဆိုင်ရာ တရားဒေသနာကို အဆုံးသတ်ဖို့ နှောင့်ယှက်ခဲ့ပါတယ်။ ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းအတွက် ဘုရားသခင်ကို မည်ကဲ့သို့ နာကျင်စေသနည်း။ Gemara သည် ဤဝေစာချက်အား ဤနည်းဖြင့် အဆုံးသတ်ရန် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။ ဤနေရာတွင် ဦးတည်ချက်ဖတ်ခြင်းမဟုတ်ပါလား။
Kiddushin ရှိ Gemara တွင် Rabbi Asi နှင့်သူ၏မိခင်အကြောင်းလှပသောဒဏ္ဍာရီတစ်ခုရှိသည်။ Miriam၊ အခန်း XNUMX နှင့် Maimonides တို့၏ ဥပဒေများကို လုံးလုံးလျားလျား ထည့်သွင်းရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ စာစောင်၏အဆုံးတွင် အရှင်ဘုရားအာစီက “ငါမသိပါဘူး နာဖာကီ” လို့ မှတ်ချက်ပေးသူအများစုက ဒီဝါကျကို halakhic မျက်မှန်နဲ့ ရှင်းပြထားပါတယ်။ အရှင်ဘုရား အာစီက ဟာလခ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဣသရေလပြည်မှ ထွက်ခွာမည်မဟုတ်ကြောင်း (ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် တပါးအမျိုးသားတို့၏ အညစ်အကြေးနှင့် အခြားအကြောင်းများကြောင့်) ဟုမိန့်တော်မူ၏။ Maimonides က Halacha မှာ သူ့မိဘတွေ လှည့်စားခံရရင် နှစ်သိမ့်ပြီး တခြားတစ်ယောက်ကို ဂရုစိုက်ဖို့ အမိန့်ပေးနိုင်တယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။ Money Mishnah သည် Maimonides အား အားကောင်းစေပြီး ထိုကိစ္စကို အတိအလင်း မရေးထားသော်လည်း Rabbi Asi သည် ယခင်အတိုင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ Rabbi သည် Maimonides ကို ဒေါသထွက်ကာ ဤနည်းလမ်းမဟုတ်ကြောင်းနှင့် လူတစ်ဦးသည် ၎င်း၏မိဘများကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန် အခြားသူတစ်ဦးထံ ထားရစ်နိုင်ပုံကို အခိုင်အမာဆိုသည်။ (It can be argued that this isahalakhic consideration but simply implies that he can't tolerable the idea of ​​morality) No issues = I would not leave Babylon. Maimonides ကို Rab'ad ၏တိုက်ခိုက်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်။
အမှန်က Maimonides နှင့် ငွေတရားမျှတမှုတို့သည် ဟာလာခိပ်တရားမျှတမှုသာရှိသော်လည်း ပညာရှင်နှင့် တရားသူကြီးတစ်ဦးတို့သည် ဤဒဏ္ဍာရီကို ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ရင်ခုန်စရာစာဖတ်ခြင်းတွင် အမှန်စင်စစ်ဖတ်ရှုကြသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မျက်စိဖြင့် မြင်နေရပါသည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် ပညာရှိကျောင်းသားတစ်ဦး၏ ရှေ့မှောက်တွင် Rabbi Yehuda Brandes, "A Legend in Real" ဟူသော သာဓကအနည်းငယ်နှင့် ပို၍အောင်မြင်သော စာအုပ်များကို ကျွန်ုပ်ပေးမည်ဟု ခန့်မှန်းမိပါသည်။
PS- ပြောင်းလဲခြင်းအငြင်းပွားမှုဆိုင်ရာ ကော်လံတစ်ခုကို စောင့်ဆိုင်းခြင်း (သင်မည်မျှခံနိုင်ရည်ရှိမည်နည်း။)
အင်္ဂါနေ့ Nissan 11 - 04/2022/00 13:XNUMX တွင်
အမှန်တကယ်တော့ ဥပမာအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ကော်လံ 214 တွင် သူ၏မြှားကြောင့် ပြာများကို ကြည့်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီမှာ ငါပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး။ ကွာရှင်းခြင်းသည် မကောင်းကြောင်းကို သင်ပေးချင်ကြသည်။ ဤကိစ္စရပ်များတွင် ဟလခဟ်စီရင်ချက်နှင့် မည်သို့ဆိုင်သနည်း။ ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် ကြိုးပမ်းသင့်သည်ဟု ဟာလခကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသည့် အထွေထွေခေါင်းဆောင်များနှင့် သက်ဆိုင်သည်။
အင်္ဂါနေ့ Nissan 11 - 04/2022/09 36:XNUMX တွင်
“ခုံသမာဓိလူကြီးက သူ့ရှေ့ရောက်လာတဲ့အမှုကို အေးအေးဆေးဆေး စဉ်းစားသင့်တယ်။ ဟာလခ ပြောတာဟာ စိတ်ခံစားချက်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး (ကိုယ်ကျင့်တရားက ပြောတာတောင် မဟုတ်ဘူး)၊ အဲဒါက ကောင်းတယ်။ ခုံသမာဓိသည် စိတ်ကို ချုပ်တည်းထားခြင်းဖြင့် ဥပဒေကို ဖြတ်တောက်သင့်ပြီး ထို့ကြောင့် Torah ၏ အမှန်တရားကို ညွှန်ပြခွင့်ရှိသည်။ "အခုထိ မင်းစကား
Halacha ကို ရှုံ့ချခြင်းခံရတဲ့ အရှင်ဘုရား အာစီနဲ့ သူ့အမေ ပုံပြင်ထဲက ဥပမာတစ်ခုကို ပြောပြခဲ့တယ်။ အရှင်ဘုရားနှင့် ရာရှ်တို့သည် လူသား သို့မဟုတ် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ နောက်ခံကို ဟာလဂ်ဖြင့် သဘောမတူကြောင်း ငါအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
အင်္ဂါနေ့ Nissan 11 - 04/2022/10 03:XNUMX တွင်
ပိုဆိုးသော တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုးကားသည် လုံးဝကိုးကားရန် အပြည့်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ အခြေခံ halakhic ရွေးချယ်မှုတွေကို ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါ အဆင့် B မှာ အဲဒီလို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့် နေရာရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်ရေးခဲ့ပါတယ်။ ဥပဒေကို ဖြတ်တောက်ခြင်းမပြုသော်လည်း ရွေးချယ်စရာများစွာ ကျန်ရှိနေပါက ၎င်းတို့ကြားတွင် ဆုံးဖြတ်ရန်နည်းလမ်းသည် အကျင့်စာရိတ္တ (သရုပ်ပြမှုတစ်ခုအဖြစ် စိတ်ခံစားမှု) လည်း ပါဝင်နိုင်သည်။
Nissan 11 - 04/2022/19 59:XNUMX တွင် XNUMX စီး
1. ဤသည်မှာ Gemara သည် အမျိုးသမီးများအတွက် မဟုတ်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ၎င်းကို ဆွေးနွေးရန် အရည်အချင်းမပြည့်မီသော အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် ။ (မေးတာ မသတ်မှတ်ပါဘူး)
2. အမှန်က “ကျမ်းနှစ်ကျမ်းနှင့် ဘာသာပြန်တစ်ခု” ကိုဖတ်သည့်နှစ်များတွင် ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးသမီးမျိုးဆက်အတွက် စိတ်ခံစားမှုကင်းမဲ့သော Torah မှ ပုံပြင်များကိုတွေ့ခဲ့ရပြီး (သေချာသည်မှာ သေချာသည်) အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်၏ပတ်ဝန်းကျင်ကို ၎င်းနှင့် တစ်ခါမျှမမျှဝေခဲ့ပါ။ အထူးသဖြင့် ခံစားချက်တွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ခံစားချက်တွေကို ပြောပြဖို့ စကားလုံးတွေ ကျွန်တော့်မှာ မရှိတော့ဘူး၊ အခုချိန်မှာတော့ Rebecca ကို ယူဖို့ Eliezer က Eliezer လာခေါ်ဖို့ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုတစ်ခုကလွဲလို့ (ကမ္ဘာကြီးဟာ မိသားစုတစ်စုတည်း မဖြစ်သေးတဲ့အချိန်၊ သူ့မိသားစုနဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံး ကွဲကွာသွားတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်) သူ့အဖေ ဗေသွေလနဲ့ သူ့အစ်ကို Ben တို့က နှောင့်နှေးကြန့်ကြာပြီး မိန်းကလေး (သူမ သုံးနှစ်သားအရွယ်က စိတ်ခံစားချက်ကို အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့၊ ဇာတ်ပွဲတစ်ခုလုံး) ပညာရှိများမေးပြီး သူ့အဖေက ဗိမာန်တော်မှာ ဘယ်မှာလဲ။ သူသေသွားပြီလို့ ပညာရှိတွေက ပြန်ဖြေတယ် (ပန်းကန်တွေကို အစားထိုးတဲ့ ကောင်းကင်တမန်က Eliezer အတွက် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အဆိပ်ပန်းကန်ပြားကို စားပြီး ဟိုက်ဒါရဲ့ သတိပေးချက်အတိုင်း) ချက်ခြင်းတောင်းပြီး ရေဗက္ကာကို သူ့လမ်းကို ပို့ပေးခဲ့တာပါ၊ ဒီနေ့ ဒီလို အဖြစ်ဆိုးမျိုး Dom Eliezer ရဲ့ အခြေအနေကို တွေးကြည့်တော့ အနည်းဆုံး သူ့အစီအစဉ်နဲ့သူ ပျားပန်းခတ်နေမယ့် အချိန်မျိုးမှာ သူ့တစ်တန်းလုံး ရှက်ရွံ့နေသလို ခံစားရပြီး အခု အိမ်မှာနေရင်း မိသားစုအဖြစ်ဆိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ် ( ဖြစ်နိုင်ရင် ပစ္စည်းကို တိတ်တိတ်လေးခေါက်ဖို့ ကြိုးစားရင်း၊ ဤမျှခက်ခဲသောအချိန်အခါမျိုးတွင် သူရောက်လာသည်နှင့် တနည်းအားဖြင့် မသက်မသာဖြစ်မှုမှ ထွက်ခွာသွားရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အသုဘအခမ်းအနားကျင်းပရန်နှင့် တဲဆောက်ရန်နှင့် ဝမ်းနည်းပူဆွေးသူများအတွက် ကုလားထိုင်များ ယူဆောင်လာရန် စသည်ဖြင့်) သို့သော် လက်တွေ့တွင်၊ တိုရာကမ္ဘာသည် ခါတိုင်းကဲ့သို့ ဆက်လက် တည်ရှိနေသည်မှလွဲ၍ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာတွင် အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာသည် အပေါင်းအသင်းကောင်းရန် "Dauriyta" မှ ကိုးကွယ်ရာတစ်ခု ရှိပါသည်။ယောသပ်နှင့် သူ၏အစ်ကိုကိစ္စတွင်၊ အမျိုးကောင်းသားတို့၊ ဤအခြေအနေသည် (ဤဧသော၏ တုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုမှာ ပညာရှိများအတိုင်း မဖြတ်သန်းခဲ့ပေ။ အများသိကြသည့်အတိုင်း နှစ်ပေါင်းထောင်ချီအကြာတွင် ဂျူးလူမျိုး မော်ဒကဲအား ပေးဆောင်ခဲ့သည်)။ တခါက တရားသူကြီးတွေက သူ့မိန်းမနဲ့ ကွာရှင်းဖို့ တွန်းအားပေးဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ ယဇ်ပလ္လင်က မျက်ရည်ကျစေတယ်လို့ ရေးထားတဲ့ တရားသူကြီးတွေက ဒီနေ့အထိ မျက်ရည်မကျဘူးလို့ ပြန်ပြောတယ် မျက်ရည်နည်းနည်းကျတာ မနာကျင်ဘူး ယခုလည်း အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သားကို ဓားဖြင့်ထိုးသတ်ရာ ကျောင်း၌ ဖခင်တစ်ဦးမှ သဒ္ဒါဝိဇ္ဇာ ဘဝင်သို့သွား၍ အညစ်အကြေးကြောက်၍ အကူအညီတောင်းရန် ပျာယာခတ်နေစဉ် သားကို ခေါ်ထုတ်ရန် အမိန့်ပေးကာ ဂေမရကိုလည်းကောင်း၊ အဲဒီ့အဖေက လူသတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ရင် သူ့မှာ အလွန်ရိုသေမှု ဒါမှမဟုတ် အထီးကျန်ဆန်ခြင်းရှိမရှိ ဆွေးနွေးတယ်။
3. ရဗ္ဗိရဲ့ မှတ်ချက်စကားနဲ့ ပြောရရင် “ဒယ်အိုးက ဘာလဲ R. Chaim ကို မေးတာနဲ့တူတယ်” လို့ ရဗ္ဗိရဲ့ စံနမူနာက မအောင်မြင်ဘဲ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်နဲ့ ဥပမာပေးပါ့မယ်။ ? R. Avraham သည် တုန်လှုပ်သွားပြီး အဓိပ္ပါယ်များစွာကို နားလည်ပါသလားဟု ပြောပါသည်။ Babylonian နှင့် Jerusalemite နှင့် Midrashim နှင့် Tosefot နှင့် Zohar စသည်တို့တွင် ထောပတ်သီးဟူသော စကားလုံးသည် မရှိပါ။
မဆွတ်ပန်သည် ဤနေရာ၌ ရဗ္ဗိဆရာကြီး မရေးထားခဲ့သော ဆောင်းပါးအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဤနေရာ၌ အကြိမ်များစွာ ဖော်ပြထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့ ရဗ္ဗိ၏ စီရင်ချက်ကို ထိန်းကျောင်းရန် မိန့်ကြားတော်မူသည့်အတိုင်း ရဗ္ဗိသေသွားပြီးနောက်၊ နွားသတ်ရတာထက် အသက်သုံးဆယ်ကျော်လောက်က မြင့်မြတ်တဲ့ နွားတွေကို သတ်ရတာ ကြိုက်တဲ့ ရေကန်က ဘုရားကျောင်းတောင် အမိုးခုံးပေါက်ကွဲတာထက် မြင့်မြတ်တဲ့ နွားမကို သတ်ရတာ ပိုလွယ်ပါတယ်၊ တစ်ခါက တတ်ကျွမ်းတဲ့ ရပ်ကွက်က ရဗ္ဗိဆရာကို မေးဖူးပါတယ်။ တကယ်ချီးမွှမ်းစကား ပြောခွင့်ရှိမရှိ ဆဲဆိုခြင်း (ကျွန်ုပ်အတွက် ချီးမွှမ်းစရာတစ်ခုပါ) ဒါပေမယ့် နားထောင်သူဟောင်က ဒီဇာတ်လမ်းကို ရှုတ်ချတယ်လို့ ထင်ပြီး R. Chaim အကြောင်း ဇာတ်လမ်းတွေကို နမူနာအဖြစ် ယူခဲ့တာ (R. Chaim ပြောတဲ့နည်းနဲ့၊ Rabbi Shefilot Assistants နှင့် ပတ်သက်သော အခြားအထောက်အထားများမှလွဲ၍ မည်သည့် Torah မှလွဲ၍ ဘာကိုမှ မမှတ်မိစေရန် တစ်နေ့သုံးကြိမ် ဆုတောင်းပြီး တားမြစ်ထားကြောင်း ရဗ္ဗိက ပြန်ပြောပြီး အမေရိကားရှိ Yeshiva ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေဖြင့် ထိုနေရာတွင် ရှိကြောင်း၊ ဂျွန်ဆင်လို့ခေါ်တဲ့ သမ္မတတစ်ယောက်အတွက် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲပဲလို့ ထင်ပါတယ်၊ သူတို့မှာ Yeshiva ဝန်ကြီးတစ်ယောက် ရှိပြီး သူတို့ Yeshiva ရဲ့ ဦးခေါင်းက သင်ယူမှုမှာ အလွန်နှစ်မြုပ်နေပြီး Yeshiva က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ သမ္မတဖြစ်လာပုံကို ညတွင်းချင်းပဲ Yeshiva က အံ့အားသင့်နေခဲ့ပါတယ်။
Nissan 11 - 04/2022/20 15:XNUMX တွင် XNUMX စီး
ဒယ်အိုး၏ R. Chaim သည် Brisk of R. Chaim ဖြစ်သည်။
Nissan 12 - 04/2022/01 06:XNUMX တွင် XNUMX စီး
အဲဒါ ဘယ်ကလာတာလဲ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ အဓိကအချက်မှာ R. Chaim Welder မဟုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်ဦးလုံး ဝန်ခံပါသည်။
Nissan 12 - 04/2022/02 15:XNUMX တွင် XNUMX စီး
Rabbi Chaim of Brisk သည် ထင်မြင်ချက်စစ်တမ်းတစ်ခုမှ ဒယ်အိုးများနှင့် အိုးများကို ထုတ်ယူခဲ့ကြောင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဒယ်အိုးတစ်လုံးကို မည်သို့တည်ဆောက်ကြောင်း၊ လက်ကိုင်၏အရှည်နှင့် မျက်နှာပြင်၏အချင်းကြား အချိုးသည် မည်မျှရှိသည်ကို အတိအကျသိရန် မလိုအပ်ဟု ဆိုသည်။ . ထို့ကြောင့် ကလေးသည် မည်သည့်အရာဖြစ်သည်ကို အတိအကျ နားလည်ရန် မလိုအပ်ဘဲ ထုံးစံအတိုင်း မဟုတ်ဘဲ တစ်ခုခုကို ပြုမူခြင်းမျိုးနှင့် ဥပဒေများ အမျိုးမျိုးရှိရုံသာ ရှိပြီး သူ၏ halakhic နားလည်မှုသည် တစ်စုံတစ်ရာ ပျက်စီးသွားခြင်း မရှိပေ။
ယေဘူယျအားဖြင့် Rabbi Chaim သည် Rabbi Chaim of Brisk (အနည်းဆုံး Gemara နှင့် Halacha ထက်ပိုသောနေရာများတွင်) Rashba သည် Rabbi Shlomo ben Aderet ဖြစ်ပြီး Rabbi Mishantz မဟုတ်ဘဲ Rabbi Mishantz မျှသာဖြစ်သည်။
Nissan 12 - 04/2022/17 50:XNUMX တွင် ဆယ်ခုမြောက်
အရှင်ဘုရား ဤအကြောင်းအရာကို အတိအကျကြားသိရသော ပုံပြင်တစ်ပုဒ်အတွက် ကျွန်ုပ်အား ရယ်မောစေတော်မူပါဘုရား။
ကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာမှာ သင်ခန်းစာကို သင်ကြားတဲ့ ရဗ္ဗိက (ပါဝင်သူအားလုံးက အမျိုးသားတွေပဲ) လို့ ပြောခဲ့တာကို သတိရပြီး စာသင်ခန်းတစ်ခုဆောက်ဖို့ Gemara သင်ခန်းစာကို သင်ကြားခဲ့ပြီး Tractate Yavmot မှာရှိပါတယ်။
ပြဿနာ၏ "မိသားစု" တစ်ခုလုံးကို ဘုတ်ပေါ်တွင်ဆွဲပြီး "သေပြီ" အားလုံးကို Xs ပေါ်တွင် တင်ပြီးနောက် ပြန်ကြည့်ကာ မိန်းကလေးများ၏ မျက်နှာများ ထိတ်လန့်သွားသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။
ဘုတ်ပေါ်တွင်ဆွဲထားသော "သေ" ကို သနားကြသည်။
ပြောစရာတောင် မလိုပါဘူး၊ ငါတို့အားလုံး ရယ်မောပြီး ဇာတ်လမ်းကို ကြည့်နေတာ။